February 2018 ~ Htet Aung Kyaw
အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလနှင့် ရေခဲတုံးအောက်က အာဏာများ
2:42 PM Htet Aung Kyaw No comments
The Voice Daily.
ရေပေါ်မှာမြင်နေရသော ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ စစ်ဘက် - အရပ်ဘက်က အာဏာခွဲဝေရေးကိုပြောတဲ့အခါ တပ်မတော်ဘက်ကနေ လွှတ်တော်ထဲ အမတ်နေရာ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းယူထားတာနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့အတွင်း ဝန်ကြီးနေရာ ၃ ခုယူထားတာကိုသာ လူတွေက ပြေးမြင်လေ့ရှိပါတယ်။ တကယ်က အဲဒီလိုလူအများမြင်သာတဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံထဲကအတိုင်း ပြင်ပနေရာယူမှုထက် လူတွေရဲ့အတွင်းစိတ်ထဲ နှစ်ပေါင်း ၆၀ နီးပါး တပ်မတော် (စစ်အုပ်ချုပ်ရေးစတိုင်) က စွဲကပ်နေရာယူထားခြင်းက ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ စာရေးသူက ထင်ပါတယ်။
ဆိုလိုတာက ၁၉၄၈ မှာ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးကို ၁၀ နှစ်လောက်ပဲ ကျင့်သုံးခဲ့ဖူးပြီး ၁၉၆၂ ကနေ ဒီနေ့အထိ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်လုံးလုံး စစ်အုပ်ချုပ်ရေး၊ စစ်တစ်ပိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးတွေ နဲ့သာ ရင်းနှီးလာခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးစတိုင်၊ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအတွေးအခေါ်တွေက မြန်မာလူထုကြား အမြစ်တွယ်စွဲကပ်နေပြီး ဒါတွေကို အရပ်သားအစိုးရသက်တမ်း ၅ နှစ်အတွင်း ချေဖျက်ပစ်ဖို့မလွယ်သေးပါ။
တပ်မတော်နဲ့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးစတိုင်ဆိုတာ အစိုးရတပ်မတော်တစ်ခုတည်းကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါ။ လက်နက်ကိုင်ထားတဲ့အဖွဲ့တွေ အားလုံးကို ဆိုလိုပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ရင် လည်း လက်နက်ကိုင်အပေါ်မူတည်ပြီး အဲဒီအဖွဲ့ရဲ့ ဩဇာအရှိန်အဝါကို သတ်မှတ်လေ့ရှိပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ အဲဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတွင်းမှာတောင် ရွေးကောက်ခံပါတီဥက္ကဋ္ဌထက် တပ်ကိုကိုင်ထားတဲ့ တပ်မှူးတွေက ပိုဩဇာရှိနေတတ်ပါတယ်။
ဒါဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုဖြစ်နေပြီလား။ လက်နက်ကိုင်အင်အားရှိမှ နိုင်ငံရေးဩဇာရှိမှာလား။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးချင်ရင် လက်နက်ကိုင်အင်အားများများ စုထားဖို့လိုနေပြီလား။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကနေ ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆီ အသွင်ပြောင်းတဲ့အခါ ဒီလိုစဉ်းစားပုံတွေနဲ့ အလုပ်ဖြစ်ပါ့မလား။
သမ္မတနဲ့ တပ်ချုပ်/ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ နယ်-လုံ
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဗဟိုအစိုးရမှာ သမ္မတက အာဏာအမြင့်ဆုံး ဖြစ်သလို ပြည်နယ်-တိုင်း အစိုးရတွေမှာလည်း ဝန်ကြီးချုပ်က အာဏာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့ နေ့စဉ် အုပ်ချုပ်မှုယန္တရား တကယ်လည်ပတ်နေပုံကိုကြည့်ရင် စာအုပ်ထဲကအတိုင်း ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိနိုင်ပါတယ်။
သမ္မတဦးထင်ကျော် အစိုးရအောက်မှာ ဝန်ကြီးဌာန ၂၁ ခုရှိပြီး ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အောက်မှာ ၃ ခုသာ (အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့ဆိုင်တဲ့ ကာကွယ်ရေး၊ ပြည်ထဲရေးနဲ့ နယ်စပ်ရေးရာကို တပ်မတော်က ယူထားပြီး နိုင်ငံခြားရေးတစ်ခုကိုပဲ အရပ်သားအစိုးရအားပေးထား) ရှိပါတယ်။ အလားတူ ပြည်နယ်-တိုင်းဒေသကြီး အသီးသီးမှာလည်း ဝန်ကြီးချုပ်အပါအဝင် ရှိသမျှဝန်ကြီးဌာနအားလုံးကို အရပ်သားဝန်ကြီးတွေက ယူထားပြီး နယ်-လုံတစ်ခုကိုသာ တပ်မတော်ဘက်က ယူထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် လက်ရှိအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံကို အရပ်သားကြီးစိုးတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးလို့ ယေဘုယျဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့မှာတော့ တပ်မတော်က ကိုင်ထားတဲ့ ဝန်ကြီးဌာန ၃ ခုက အရပ်ဘက်ဝန်ကြီးဌာန ၂၁ ခုထက် ပိုဩဇာရှိနေပါတယ်။ ပြည်နယ်-တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာလည်း ရဲ၊ ထွေ-အုပ်တွေကို ကိုင်ထားတဲ့ နယ်-လုံ က ကျန်ဝန်ကြီးတွေအားလုံးထက် ပိုဩဇာကြီးနေပါတယ်။ နယ်ခရီးစဉ်တွေအတွင်း မြင်မိသလောက်ကတော့ ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ နယ်-လုံဝန်ကြီးတွေလောက်မှာပဲ လက်နက်ကိုင်လုံခြုံရေးအစောင့်ပါပြီး ကျန်ပင်နီဝတ်ဝန်ကြီးတွေမှာ ဘာလုံခြုံရေးမှ မတွေ့မိပါ။ ပင်နီဝတ် သာမန်အမတ်တွေဆို ပိုဝေးပေါ့။
နောက်တစ်ချက်က အုပ်ချုပ်ရေးအတွေ့အကြုံ။ ပြည်နယ်-တိုင်း ဝန်ကြီးအများစုက ဆရာဝန်တွေ၊ ကျောင်းဆရာတွေ၊ ကျူရှင်ဆရာတွေ၊ သာမန်အရပ်သားတွေကနေ လာတာဆိုတော့ အုပ်ချုပ်ရေးအတွေ့အကြုံ ဘာမှမရှိပါ။ နယ်-လုံဝန်ကြီးကတော့ ဗိုလ်မှူးကြီးဆိုရင် တပ်ရင်းမှူး၊ ဗိုလ်မှူးဆိုရင် တပ်ခွဲမှူးလောက်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတာမို့ တစ်စုံတစ်ရာ လက်တွေ့ တပ်အုပ်ချုပ်ရေးရှိခဲ့ဖူးတဲ့အပြင် စစ်တက္ကသိုလ်မှာလည်း အုပ်ချုပ်ရေးပညာကို တစ်စုံတစ်ရာ သင်လာခဲ့ဖူးသူဖြစ်နေပါတယ်။
ဒီလိုနောက်ခံအချက်အလက်တွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစိုးရနှစ်ရပ်ရှိနေတယ်ဆိုပြီး နိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေက ညွန်းဆိုလေ့ရှိပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ နိုင်ငံတကာအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေ မြန်မာနိုင်ငံဆီလာရင်လည်း သမ္မတနဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အပြင် တပ်ချုပ်ကိုပါ မပျက်မကွက်အလေးထား တွေ့ဆုံနေတာ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဘက်မှာလည်း လက်နက်အင်အားကို ဦးစားပေး
ဒါက နေပြည်တော် အုပ်ချုပ်ရေးအောက်က အာဏာလည်ပတ်ပုံ အခင်းအကျင်းပါ။ နေပြည်တော်ရဲ့ အပြင်ဘက်ရှိ လက်နက်ကိုင်တပ်တွေရဲ့ နယ်တွေကို လှမ်းကြည့်ဦးမလား။ လက်နက်ကိုင်အင်အား ၃ သောင်းကျော် ရှိတယ်ဆိုတဲ့ “ဝ” UWSA နယ်ကိုပဲ အရင်ဆုံး ဥပမာပေးရပါလိမ့်မယ်။ တရုတ်နယ်စပ်နဲ့ ထိုင်းနယ်စပ်က သူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေမှာ အစိုးရတပ်နဲ့ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေအားလုံး “ဝ” အစိုးရခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ဘာမှလုပ်ခွင့်မရှိပါ။ ဒါဟာ “ဝ”အဖွဲ့မှာ လက်နက်ကိုင်အင်အား ၃ သောင်း ကျော်ရှိနေလို့၊ တစ်နည်း အားဖြင့် တခြားသူပုန်အဖွဲ့တွေထက် “ဝ” အဖွဲ့ က လက်နက်ကိုင်ပိုများနေလို့ အစိုးရဘက်က လိုက်လျောနေရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
“ဝ” နယ်ကို နည်းနည်းကျော်ပြီး ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ်အဖွဲ့ဆိုတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့ရဲ့ စစ်အင်အား ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကိုတော့ ၂၀၁၆ နှောင်းပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တရုတ်နယ်စပ် ကုန်သွယ်ရေးလမ်းပေါ်က တိုက်ပွဲတွေကိုကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့ထဲမှာ KIA (ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်)၊ TNLA (တအာင်း အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်)၊ MNDAA (ကိုးကန့်တပ်မတော်)၊ AA (ရခိုင့်တပ်မတော်) တို့ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါက အဲဒီကာလတိုက်ပွဲအတွင်း ပါဝင်ခဲ့တဲ့တပ်တွေကို ပြောတာပါ။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ “ဝ” UWSA မိုင်းလား၊ SSPP (ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ) တို့ပါ ပါဝင်လာတဲ့အတွက် အင်အားအတောင့်တင်းဆုံး အဓိကသူပုန်မဟာမိတ်အဖွဲ့ ဖြစ်လာနေပါတယ်။
ဆိုလိုတာက လက်နက်ကိုင်အင်အားတောင့်မှ၊ မိမိအင်အားနဲ့ နယ်မြေကို တိုးချဲ့နိုင်မှ တစ်ဖက်ရန်သူက အလေးထားပြီး နိုင်ငံရေးအရ တန်းတူရည်တူ ဆွေးနွေးလာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ဒီလိုအင်အားတွေ တိုးချဲ့၊ နယ်မြေတွေတိုးချဲ့၊ မဟာမိတ်တွေဖွဲ့ပြီး လုပ်လာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး နှစ် ၇၀ ကာလ လက်နက်ကိုင်အင်အားပေါ် အခြေခံတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့ အစွန်းထွက်ပြဿနာတွေပါပဲ။
အဲဒီတပ်တွေ ဒီလို အင်အားချဲ့နေတာ၊ နယ်မြေချဲ့နေတာ၊ မဟာမိတ်ဖွဲ့နေတာကို အပြစ်ပြောဖို့ခက်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆို လက်နက်ကိုင် အင်အားနည်းတဲ့ သူပုန်အဖွဲ့ငယ်တွေကို အစိုးရတပ်ဘက်က နေရာမပေးတဲ့အပြင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ ချေမှုန်းပြနေတာ အားလုံးအမြင်ပဲမဟုတ်ပါလား။ ဒီတော့ တိုင်းရင်းသားတိုင်းက လက်နက်ကိုင်တပ်ထူထောင်ပြီး မဟာမိတ်အမြန်ဖွဲ့ရမလို ဖြစ်လာနေပါတယ်။ “လက်နက်ကိုင်တပ်ရှိနေလို့ ငါတို့လူမျိုးတွေ ဒီလောက်ခံနေနိုင်တယ်။ လက်နက်ကိုင်တပ်သာမရှိရင် အမျိုးပါပျောက်သွားမလားမသိဘူး”ဆိုတဲ့ တိုင်းရင်းသားအရေး သုတေသနလုပ်နေသူ တစ်ဦးရဲ့မှတ်ချက်ကလည်း စဉ်းစားစရာပါပဲ။
ဒီလိုလက်နက်အင်အားရှိမှ တိုင်းပြည်အင်အားရှိမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်ပေါ်အခြေခံပြီး နှစ် ၇၀ ကျော် ဖြတ်သန်းလာတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို ၂၁ ရာစုဟာ လက်နက်နိုင်ငံတော်ခေတ် မဟုတ်တော့ဘူး။ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီခေတ်ရောက်နေပြီ၊ ကျည်ဆန်ရှိဖို့ထက် ပိုက်ဆံရှိဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ်၊ တင့်ကားရှိဖို့ထက် ဘတ်စ်ကားရှိဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီး ပြောင်းရတာ သိပ်တော့မလွယ်လှပါ။
တစ်လောကတော့ စစ်သုံးစရိတ်ဘတ်ဂျက်လျှော့ချပြီး ပညာရေးဘတ်ဂျက်တိုးပေးဖို့ ကျောင်းသားတွေဆန္ဒပြတဲ့သတင်း ကြားလိုက်ရပါတယ်။ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ ဖိအားတွေကြားပိတ်မိနေတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ လွှတ်တော်အမတ်တွေ မပြောရဲဘဲဖြစ်နေတာကို ကျောင်းသားတွေက ထပြောပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်သင့်ပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေရဲ့ တင်ပြချက် ချက်ချင်းဖြစ်လာဖို့မလွယ်သေးပေမယ့် လက်နက်နိုင်ငံတော်ခေတ်ကို ဒီနေ့လူငယ်တွေက လက်မခံတော့ဘူးဆိုတာကိုတော့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ သတိထားမိလာစေပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မူလအခြေအနေ (စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ စစ်တပ်လွှမ်းမိုးတဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်) ကို လိုလားသူတွေကတော့ မြောက်ပိုင်းမှာ တိုက်ပွဲတွေရှိနေဆဲဖြစ်တာမို့ စစ်အသုံးစရိတ်လျှော့ချဖို့ မဖြစ်နိုင်သေးဘူး။ တစ်ခါ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် - မြန်မာနယ်စပ် ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ (နိုင်ငံတကာအခေါ် ရိုဟင်ဂျာ) ဘင်္ဂါလီပြဿနာမျိုးမှာဆိုရင် တပ်မတော်ကသာ အချိန်မီဝင်မထိန်းရင် အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့ အမျိုးဘာသာ သာသနာကိုပါ ထိခိုက်နိုင်တာမို့ စစ်အသုံးစရိတ် ပိုတောင်းရေးနဲ့ စစ်တပ်ကြီးစိုးရေးဟာ လိုအပ်နေဆဲလို့ ထောက်ပြကြပါတယ်။
လတ်တလောအနေအထားအရ ဒါကို ငြင်းဖို့ခက်ပေမယ့် ဒါဟာ လုံလောက်တဲ့ဆင်ခြေမျိုးတော့ မဟုတ်ပါ။ ဒီကိစ္စကို ထောက်ပြပြီး၊ ဒါမှမဟုတ် ဒီလိုကိစ္စတွေရှိနေအောင် တမင်ဖန်တီးထားပြီး စစ်အသုံးစရိတ်နဲ့ စစ်တပ်လွှမ်းမိုးရေးကို ဆွဲဆန့်ထားမသင့်ပါ။ ဒီကိစ္စ ၂ ခု အမြန်ဆုံးပြေလည်အောင် အင်အားစုအားလုံး ဝိုင်းဝန်းအဖြေရှာသင့်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းစစ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင် တပ်မတော်ကလည်း စစ်တန်းလျားဆီပြန်မယ်လို့ ကတိပေးထားတဲ့အတွက် ဒီကိစ္စပြေလည်ရေးကို အချိန်ဇယားနဲ့ ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။
တစ်နည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီနေ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာ အကြိတ်အနယ်ငြင်းခုံနေကြတဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးလုပ်ပြီးတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေကို ဘယ်လိုလက်နက်ဖြုတ်သိမ်းလဲ၊ စကားလုံးလှအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင် “လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းရေးကိစ္စ” DDR (Disarmament, Demobilization, Reintegration) ကို ဆွေးနွေးဖို့လိုသလို တိုင်းရင်းသားတပ်တွေ လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းပြီးရင် တပ်မတော်ကလည်း နိုင်ငံရေးကစွန့်ခွာပြီး စစ်တန်းလျားဆီ ဘယ်လိုပြန်မယ်ဆိုတာကို အချိန်ဇယားနဲ့ ဆွေးနွေးဖို့လိုနေပါတယ်။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတော့ မြန်မာ့တပ်မတော်ဟာ အင်ဒိုနီးရှားတပ်မတော်လိုပဲ ပထမပိုင်းမှာ ပါလီမန်အတွင်း အမတ်နေရာ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းယူပြီး အစိုးရသက်တမ်း ၅ နှစ်တစ်ခါ တဖြည်းဖြည်းချင်း လျှော့ချသွားလိမ့်မယ်လို့ အကဲခတ်တွေက နားလည်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခု ဒုတိယသက်တမ်းကုန်ခါနီးတဲ့အထိ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကနေ လျှော့ချမှုမရှိတဲ့အပြင် စစ်သုံးစရိတ်တောင် ထပ်ဆောင်းပေးဖို့ တောင်းဆိုလာနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာ့တပ်မတော်ဟာ အင်ဒိုနီးရှားတပ်မတော်စတိုင် နိုင်ငံရေးခွာစစ်ပုံစံကနေ ထိုင်းတပ်မတော်စတိုင် နိုင်ငံရေးမှာ ဩဇာရှိရေးဘက်ဆီ ရွေ့လျားစပြုလာနေပြီလို့ ဝေဖန်သူတွေက ထောက်ပြလာနေပါတယ်။
ဒါဟာ ကောင်းတဲ့အလားအလာမဟုတ်ပါ။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကနေ ဒီမိုကရေစီကိုအသွင်ပြောင်းတဲ့အခါ ပထမပိုင်းမှာ စစ်တစ်ပိုင်း အရပ်သားတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတာကို နားလည်ပေးလို့ရနိုင်ပေမယ့် အစိုးရသက်တမ်း ၂ ကြိမ် ၁၀ နှစ်အတွင်းမှာတော့ စစ်ဘက်လွှမ်းမိုးမှု တဖြည်းဖြည်းလျော့ကျလာပြီး အရပ်ဘက်အုပ်ချုပ်မှု တဖြည်းဖြည်းအားကောင်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အခု မြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံနေရတဲ့အခြေအနေက ကြာလေ စစ်ဘက်လွှမ်းမိုးမှုက ပိုများလာလေဖြစ်နေပါတယ်။ စစ်ဘက်ကို အားနည်းသွားအောင် လုပ်မိ၊ ပြောမိရင်ပဲ တိုင်းပြည်အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့ အမျိုးဘာသာသာသနာကို ထိခိုက်စေသူ၊ မျိုးချစ်စိတ်မရှိသူဆိုပြီး တံဆိပ်ကပ်တဲ့ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေဝင်လာနေတာဟာ အတော်ဆိုးပါတယ်။
ဒါကြောင့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုဟာ အများမြင်သာတဲ့ လွှတ်တော်ထဲက အမတ်နေရာ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေးသာမက အများမမြင်သာတဲ့ ရေအောက်မှာမြုပ်နေဆဲ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းသော စစ်အုပ်ချုပ်ရေးစတိုင်လွှမ်းမိုးမှု၊ တပ်မတော်အင်အားရှိမှ တိုင်းပြည်အင်အားရှိမယ်ဆိုတဲ့ လက်နက်နိုင်ငံတော်ခေတ် အတွေးအခေါ် လွှမ်းမိုးမှုတွေကိုပါ တစ်ပြိုင်တည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုနေပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ ။
2:16 PM Htet Aung Kyaw No comments
Test 1 (ဗွီဒီယုို အက်ဒစ် လေ့ကျင့်ခန်းအတွက်)
Abu Dhabi Tour ပွဲ ပထမနေ့ Kristoff အနုိုင်ရ...။ Cavendish က ပွဲမစခင်မှာ လဲပြိုပြီး ထွက်လုိုက်ရ...။
အာဘူဒါဘီမှာ ဒီနေ့စတင်တဲ့ Abu Dhabi Tour ပွဲ (ဖေ ၂၁ မှ ၂၅ အထိ) ပထမနေ့ (Madinat Zayed - Madinat Zayed) 189 km မှာ နော်ဝေ တာတုိုဘုရင် Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates က 4:48:24 နာရီနဲ့ ပထမ ရသွားပါတယ်။
ဒါဟာ အိမ်ရှင် UAE အသင်းဆီပြောင်းပြီး အိမ်ရှင်နုိုင်ငံမှာ ပထမ ဆုံးအနုိုင် ရတာမုို့ အထူးဝမ်းသာမိတယ်လို့ ခရစ်စတော့ကပြောပါတယ်။ တကယ်ဆုို သူဟာ Lead-out man ပျောက်ပြီး လမ်းကြောင်းပိတ်နေရာကနေ အီဝမ်ရဲ့ နောက်ဘီးမှာ ကပ်ပါလာနုိုင်ခဲ့ပြီး အခုလုို ပထမ ရသွားတာပါ။
10 André Greipel (Ger) Lotto Soudal။
နာမည်ကြီး ကစ်တဲလ်ကတော့ ဒီနေ့မှာလဲ လမ်းကြောင်းပိတ်မိပြီး ပထမ မရပြန်ဘူး။ ၁-၁၀ ထဲတောင် မ၀င်ပါဘူး။ သူ့ထက်အခြေအနေပုိုဆုိုးသူက တော့ ဗြိတိန် တာတုိုဘုရင် ကာဗင်းဒစ်ပါပဲ။ သူဟာ ပွဲမစခင် နယူထရယ်ဇုံ neutralized zone မှာစီးနေတုန်း ဒုိုင်လူကြီးကားအရှိန်လျော့ လုိုက်စဉ် နောက်ကနေ၀င်တုိုက်မိတဲ့အုပ်ထဲပါပြီး လဲပြိုခဲ့ပါတယ်။
နယူထရယ်ဇုံဆုိုတော့ အရှိန်မရှိပါဘူး။ တခါတခါ အရှိန်မရှိပဲ လဲတာက ပုိုဆုိုးသလားမသိပါ (စာရေးသူ လက်ကျိုးတုန်းကလုိုမျိုး)။ ကားဗင်းဒစ်ဟာ တခြားစက်ဘီးသမား ၁၀ ဦးခန့်နဲ့အတူ လမ်းပေါ်ပြုတ်ကျခဲ့ပါတယ်။ တခြား လူတွေဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ သူကတော့ အရင် (ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလုိုင် တုိုးဒီဖရင့် ၄ ရက်မြောက်နေ့က ဆာဂန်နဲ့တုိုက်မိလဲပြိုစဉ် ကျိုးထားတဲ့ ပခုံး) တုိုးဒီဖရင့် တုန်းက ကျိုးထားထဲ့ ပခုံးရုံးဖက်နဲ့မြေကြီးပေါ် ကျသွားခဲ့တယ်ဆုိုပါတယ်။
ချက်ချင်းထပြီး ပြန်လုိုက်ပေမဲ့ နောက်ထပ် ၅ ကီလိုခန့်စီးပြီးချိန်မှာ အရုိုး ထပ်ကျိုးသွားပုံရလို့ ပွဲကနေ ထွက်လုိုက်ရပါတယ်။ ဒီဒဏ်ရာက သူ့ရဲ့ ၂၀၁၈ အစီစဉ်တွေကို ဘယ်လုိုထိခုိုက်စေ မလဲ မသိသေးပါ။
(အခုနောက်ဆုံးသိရတဲ့သတင်းတွေအရ အာဘူဒါဘီပွဲမှာသုံးတဲ့ ဒုိုင်ကားတွေဟာ အော်တိုဘ ရေ့စင်စတန်ဆင်ထားတာမုို့ စက်ဘီးသမားတွေက ကားနောက်သိပ်ကပ်တဲ့အခါ the sensor က အော်တုိုဖမ်းပြီး ကားက အလုိုလုို ဘရေ့အုပ်လုိုက်တယ်ဆုိုပါတယ်။ ကံဆုိုးချင်တော့ အဲဒီလုို အော်တုိုဘရေ့အုပ်တဲ့အချိန်မှာ ကားဗင်းဒစ်ဟာ ကားနောက်မှာရောက်နေပြီးလဲပြိုခဲ့ပါတယ်။ လဲပြိုစဉ် ဘေးမှာလဲနေသူရဲ့ စက်ဘီးနောက်ဘီးပေါ် ခေါင်းနဲ့ဆောင့်မိသေးတယ်ဆိုပါတယ်။
ချက်ချင်းဆေးရုံတင်ပြီး စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပေးတယ်ပြောပေမဲ့ အသေးစိပ်မသိရသေးပါ။ လည် ပင်းမှာနဲနဲနာသွားပေမဲ့ စုိုးရိမ်စရာမရှိဘူးလုို့ ဒါမင်ရှင်ဒါတာ အသင်းဆရာဝန်ကပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရှေ့လစမဲ့ အီတလီက ကလစစ်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့ Tirreno-Adriatico and Milan-San Remo မှာ သူဝင်ပြိုင်နုိုင်မနုိုင် မသိရသေးပါ။ လော လောဆယ်တော့ ပွဲစီစဉ်သူတွေဖက်က သုံးနေတဲ့ ကားတွေမှာ အော်တုိုဘရေ့ထည့်ထားတဲ့ အပေါ် ဝေဖန်မှုတုိုးနေပါတယ်။
ပွဲစီစဉ်သူ RCS Sport ဖက်က နောက်ဆုံးထုတ်ပြောချက်အရတော့ အော်တုိုဘရေ့ စင်စတန် ကို deactivate ပြန်လုပ်မယ်လို့ ကတိပေးကြောင်းနဲ့ လဲပြိုပြီးထွက်လုိုက်ရတဲ့ ကားဗင်းဒစ်ဆီကုိုလဲ RCS Sport တာဝန်ရှိသူတွေ သွားရောက်တွေ့ဆုံအားပေးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်)။
မနက်ဖန်မှာတော့ ဒုတိယနေ့အဖြစ် (Yas Mall - Yas Beach) 154 km ကုို ဆက်လက်ယှဉ် ပြိုင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ မြေပြန်ပွဲမုို့ စပရင့်တာတွေပဲရမှာသေချာပါတယ်။ မေးစရာကျန်တာက ဘယ်စပရင့်တာလဲ။...ဒူဘုိုင်းပွဲကနေ အခုထိ ပထမ မရသေးတဲ့ ကစ်တဲလ် မနက်ဖြန်မှာ ပထမ ရနုိုင်မလား။ ဒီနေ့တင်တာစောသွားတဲ့ အီဝမ်ပဲရမလား။ Lead out အားကောင်းလှတဲ့ ကွိစတက်အသင်းက ဗီဗာနီကုို ပထမရအောင် လုပ်ပေးနုိုင်ဦးမလား...။ ။
2:18 AM Htet Aung Kyaw No comments
ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်က တပတ်လုံးနီးပါး နှင်းမုန်တုိုင်းကျလုို့ ရထားတွေ၊ ဘတ်စ်တွေ အချိန်မှန် မပြေးနုိုင်ခဲ့ဘူး။ နှင်း တွေက ဒူးလောက်ရှိပြီး ကားတွေလမ်းချော်နေတာ၊ လမ်းပိတ်လုို့ ထရပ်ကားနဲ့လာဆွဲပေးနေတာတွေ အိမ်ပေါ်ကနေ လှမ်းမြင်နေရပါတယ်။ ကုိုယ်ကတော့ အဲဒီအပတ်က အလုပ်လဲမရှိ၊ ကျောင်းလဲမရှိဆုိုတော့ အပြင်မထွက်ပဲ အိမ်ပေါ် ကနေပဲ နှင်းတောကြီးကို ငေးကြည့်နေမိပေါ့။
(ဆီးနှင်းတွေဖုံးနေတဲ့ အော်စလုိုမြို့ပြင်က ရွာလေးတရွာ)
ဒီလုိုငေးရင်းနဲ့ ဒီနှစ်ဆောင်းရာသီဟောလီးဒေး ဘယ်ကုိုသွားရင်ကောင်းမလဲ စဉ်းစားမိပါတယ်။ မနှစ်ကတော့ အ ထူးလျော့ဈေးရလုို့ မြေထဲပင်လယ်ကမ်းခြေက ဆုိုကရေတီးတုို့၊ ပလေတုိုတုို့ရဲ့ရွာ ဂရိနုိုင်ငံ အေသင်မြို့ဆီ သွားဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။ ဒီနှစ်တော့ အခုချိန်ထိ အလျော့ဈေးမတွေ့သေးလုို့ ဘယ်မှသွားဖြစ်မယ်မထင်။ ဒီလုိုစဉ်းစားရင်းနဲ့ ထူထဲစွာ ကျနေတဲ့ နှင်းထုကိုငေးပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၉ နှစ် ဒီလိုအချိန်မှာ သွားခဲ့ဖူးတဲ့ ဥရောပအနောက်ပုိုင်း မြေထဲပင်လယ် ကမ်းခြေရှိ စပိန်နုိုင်ငံ ဘာစီလုိုးနားနဲ့ ပေါ်တူဂီက လစ်ဘွန်းမြို့ကမ်းခြေတွေဆီ ရောက်သွားပါတယ်။
ကျောင်းသားဘ၀တုန်းက ဆောင်းခုိုငှက် တွေအကြောင်း စာအုပ်ထဲဖတ်ဖူးပေမဲ့ သိပ်သဘောမပေါက်ပါ။ ဥရောပက ရေခဲပြင်ကိုရောက်မှပဲ ဒီလုိုဆီးနှင်းတွေကြားမှာ ငှက်တွေ ဘယ်လုိုရှင်သန်နုိုင်မလဲဆုိုပြီး စဉ်းစားမိပါတယ်။ ဒီတော့ နုိုဝင်ဘာနှောင်းပိုင်းရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ငှက်အမျိုးအစားအတော်များများက မြေထဲပင်လယ်ကုိုဖြတ်ပြီး ဥရောပကနေ အာဖရိကဆီ ခရီးရှည်ချီတက်ကြတာပေါ့။ ခင်မောင်တုိုးရဲ့ ‘’ဂျိုးကြာငှက်တုို့ရဲ့ မုိုင်ထောင်ချီခရီး’’ ဆုိုတာ ဒါမျိုးဖြစ်မယ် ထင်ပါရဲ့။
တချို့ငှက်တွေကတော့ အာရှဖက်သွားတယ်ထင်ပါတယ်။ မြန်မာနုိုင်ငံက မုိုးယွန်းကြီးအင်းတို့၊ အင်းတော်ကြီးတုို့မှာ ဆောင်းခုိုငှက်တွေများတဲ့အကြောင်း သတင်းတွေထဲဖတ်ရပါတယ်။ ဒါက ဗီဇာမလို၊ ခရီးစရိတ်မကုန်ပဲ ‘’တောင် ပံပါ ရင် မင်းဆီသုို့’’ ဆုိုပြီး ကြိုက်တဲ့အချိန် ထသွားနုိုင်တဲ့ ငှက်တုို့ရဲ့ ထူးခြားချက်ပေါ့။
လူတွေကော ဘယ်လိုနေကြသလဲ။ လူက ငှက်လုိုမပျံနုိုင်တော့ လေယဉ်ဖုိုးတော့ ရှာရတာပေါ့။ ဗီဇာအတွက်က တော့ ဥရောပသားတွေကို နုိုင်ငံအတော်များများက ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပေးထားတယ် မဟုတ်ပါလား။ ဒါပေမဲ့ အများ စုက အာဖရိကအထိမသွားပဲ မြေထဲပင်လယ်ကမ်းခြေက စပိန်တောင်ပုိုင်း၊ အီတလီတောင်ပုိုင်းက ကျွန်းတွေဆီ သွားလေ့ရှိပါတယ်။ ထားဝယ်ပင်လယ်ကနေ တနသာင်္ရီရိုးမကုိုကျော်ပြီး ထုိုင်းပင်လယ် ဟွာဟင်ဖက်ရောက်သွား သလုိုမျိုးနဲ့တူမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဥရောပမှာက နော်ဝေပင်လယ် (အန္တလန်တိတ်သမုဒရာ) နဲ့ မြေထဲပင်လယ် က အပူချိန်ချင်းအတော်ကွာပါတယ်။
နော်ဝေမှာ အခု အနှုတ် ၁၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ရှိပြီး ဆီးနှင်းတွေ တပေလောက်ထူနေပေမဲ့ မြေထဲပင်လယ် ကမ်းခြေက ပြင်သစ်တောင်ပုိုင်း၊ အီတလီတောင်ပုိုင်း၊ စပိန်တောင်ပုိုင်း၊ ပေါ်တူဂီနဲ့ ဂရိနုိုင်ငံတွေမှာ အပူချိန်က အ ပေါင်း ၁၅ လောက်ရှိပြီး နေသာနေတတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ အနောက်ဥရောပသားအတော်များများလဲ ဆောင်းခုိုငှက် တွေလို နော်ဝေပင်လယ်ကနေ မြေထဲပင်လယ်ဆီ ပျံသန်းကြတာပေါ့။ အထူးသဖြင့် နော်ဝေက ပင်စင်စားတွေဆုို စပိန်တောင်ပုိုင်းမှာ အိမ်ဝယ်ပြီး တဆောင်းလုံး အဲဒီမှာ သွားနေကြပါတယ်။
ဒါတွေက အခုနောက်ပုိုင်း ဟုိုသွားဒီသွား၊ ဟုိုဖတ်ဒီဖတ်နဲ့သိလာတာတွေပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်နီးပါး ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီခရီးစဉ်တုန်းကတော့ ဘာမှကိုကြိုဖတ်ထားတာမရှိပါဘူး။ ၆ လတကြိမ်ကျင်းပနေကြ ဥရောပရောက် မြန်မာ့ဒီမုိုကရေစီ အင်အားစုတွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ မြန်မာ့အရေးကူညီနေတဲ့ ဥရောပအခြေစုိုက် NGO တွေရဲ့ နှစ်ပတ် လည်ဆွေးနွေးပွဲတွေ ဘာစီလုိုနားမှာကျင်းပဖို့ရှိတယ်။ အဲဒီပွဲမှာ စကားပြောဖုို့ (၂၀၀၈ ဒီဇင်ဘာမှာထုတ်ဝေတဲ့ Far from Home: 20 Years in Exile စာအုပ်ကြောင့်) ဖိတ်ကြားခံရတာကြောင့် ရောက်သွားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
(ဘာစီလုိုးနားမှာကျင်းပတဲ့ ဥရောပရောက် မြန်မာများအစည်းဝေး)
အခုချိန်မှာ ပြည်ပရောက် အင်အားစုတွေရဲ့အသံ အရေးမပါတော့ပေမဲ့ အဲဒီခေတ်ကတော့ ပြည်တွင်းမှာ ဘာမှ လုပ်ခွင့်၊ ပြောခွင့်မရတော့ ပြည်ပရောက်တွေက ပြည်တွင်းရဲ့ရင်ခုန်သံကုို နုိုင်ငံတကာက ကြားခွင့်ရအောင် အား သွန်ခွန် စုိုက်ကြိုးပန်းနေကြတဲ့ကာလပေါ့။ အဲဒီလုို ၆ လတကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတက်ရင်း၊ သတင်းယူရင်းနဲ့ ဥရောပနုိုင်ငံ အတော်များများဆီ စာရေးသူရောက်ဖူးခဲ့တယ်ဆုိုရင်လဲ မမှားပါဘူး။ ဥရောပအလယ်ပုိုင်းနုိုင်ငံတွေ ဖြစ်တဲ့ ဒိန်းမတ်၊ ဖင်လန်၊ နယ်သာလန်၊ ဘလဂျီယံ၊ ဆွင်ဇလန်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမဏီ၊ ဗြိတိန်နုိုင်ငံတွေဆီ ရောက်ဖူးပြီးဖြစ်ပေမဲ့ စပိန်က ဘာစီလုိုးနားကိုတော့ ဒါ ပထမ ဆုံးရောက်ဖူးခြင်းပါ။
အော်စလိုမှာ အနှုတ် ၁၀ လောက်ရှိနေချိန်မှာ ဘာစီလုိုနားမှာ အပေါင်း ၁၀ နီးပါးရှိနေပါတယ်။ ပြီးတော့ အပူပုိုင်းဒေသမှာသာမြင်ရလေ့ရှိတဲ့ ဆီအုန်းပင်တွေ၊ ပေပင်တွေပါမြင်ရတော့ အတော်အံ့သြသွားပါတယ်။ လမ်းတွေက ကျယ် ပြီး မြို့ကလဲ အတော်လှပါတယ်။ ပင်လယ်ကမ်းခြေလဲရှိ၊ တောင်ကုန်း တောင်တန်းတွေ လဲရှိပြီး အဲဒီတောင်တန်းပေါ် ကနေ မြို့ထဲကိုပြန်ကြည့်ခွင့်ရတဲ့ ဆည်းဆာချိန်ဟာ အလှပဆုံးလုိုထင်ပါတယ်။ အပူချိန်က ၁၅ လောက်ရှိတယ်ဆုို တော့ ကမ်းခြေသွားပြီး ဘာဘီကျုးကင်တဲ့လူတွေတောင်ရှိသေး။
ကုိုယ်တွေက တုိုးရစ်အဖြစ် လာလည်တာမဟုတ်ပဲ အစည်းဝေးကတဖက်ရှိနေတယ်ဆုိုတော့ အစည်းဝေးပြီးတဲ့ အချိန်မှ Tourist Bus စီးပြီးလျောက်လည်တာပါ။ တုိုးဘတ်စ် စီးတုိုင်းသတိရတာက မိတ်ဆွေတယောက်ဝေဖန်လေ့ ရှိတဲ့ စကား။ အစီစဉ်ကြိုဆွဲမထားသူတွေသာ တုိုးဘတ်စ်စီးလေ့ရှိပြီး အစီစဉ်ဆွဲထားသူတွေက ကုိုယ့်အစီစဉ်နဲ့ ကုိုယ် သွားလေ့ရှိတယ်တဲ့။ သူပြောတဲ့အတုိုင်းပါပဲ။ ဘာစီးလုိုးနားကိုရောက်ရင် ဘယ်နေရာတွေကို အဓီကဦးစား ပေးလေ့လာမယ်ဆုိုပြီး ဇယားဆွဲထားတာမျိုးမရှိပါ။ တုိုးဘတ်စ်ကပြတဲ့အတုိုင်း နာမည်ကြီးနေရာတွေကိုလျောက် ကြည့်တာပါပဲ။ အဲဒီထဲမှာမှ ရုိုနယ်ဒင်ဟုိုတုို့၊ မက်ဆီတုို့ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ Camp Nou ကုိုရောက်ပြီးမှ အထဲမ၀င်ဖြစ်ပဲ ပြန်လာခဲ့ရတာကို နှမျောနေမိပါတယ်။
မြို့လယ်က ဘုရားကျောင်းတွေ၊ ပြတုိုက်တွေလဲ အဲလုိုပါပဲ။ အပြင်ကနေပဲ ဓာတ်ပုံရုိုက်ပြီး အထဲ မ၀င်ဖြစ်ခဲ့ပါ။ ရာသီဥတုကပူနွေးတယ်ဆုိုတော့ ဒီလုို ဆောင်းတွင်းမှာတောင် မော်တော်ဆုိုင်ကယ်တွေက အတော်များသား။ ဘာစီလုိုးနားရဲ့ လမ်းထောင့်တွေ (လမ်းထောင့်ရှိ တုိုက်ခန်း) တည်ဆောက်ထားပုံက လေးထောင့်မဟုတ်ပဲ နဲနဲ ထူးခြားနေပါတယ်။ အဲဒီထောင့် ကွက်လပ်တွေမှာ မော်တော်ဆုိုင်ကယ်နဲ့ စက်ဘီး ရပ်ဖုို့နေရာတွေလုပ်ပေးထား ပါတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲပြီးတဲ့ရက်မှာ မြန်မာကုိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့အတူ ကာတာလုိုးနီးယားပါလီမန် ဆီရောက်သွားပါတယ်။ ဘာ စီလုိုးနားဟာ ကာတာလုိုနီးယား ကိုယ်ပုိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့အတွက် သီးခြားပါလီမန်ရှိပါတယ်။ ဆွေးနွေးမှုအတွင်း ပါလီမန်ဥက္ကဌက မြန်မာ့ဒီမုိုကရေစီအရေးကုိုထောက်ခံကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ တလောက တော့ အဲဒီပါလီမန်ကနေ ကာတာလုိုးနီးယားကုို သီးခြားလွတ်လပ်တဲ့ပြည်နယ်တခုအဖြစ်ကြေငြာလုိုက်လုို့ ပြသာနာ တွေတက်ခဲ့တာ ကြားလုိုက်ရပါသေးတယ်။
ဥရောပ တောင်ဖက်စွန်းက လစ်စဘွန်းမြို့ဆီသုို့...
ဘာစီလုိုးနားမှာ အလုပ်ကိစ္စပြီးတော့ ခွင့်တပတ်ယူပြီး ပေါ်တူဂီနုိုင်ငံဆီ သွားလည်ဖုို့စိတ်ကူးထားပါတယ်။ စိတ်ကူး တာနဲ့ အစီစဉ်ဆွဲတာ နဲနဲကွာမယ်ထင်ပါတယ်။ ရှေ့ပုိုင်းမှာအစီရင်ခံခဲ့တဲ့အတုိုင်း အဲဒီကာလခရီးသွားမှုတွေဟာ ဘာမှကြိုတင်အစီစဉ်ဆွဲထားတာမရှိ။ စိတ်ကူးပေါ်လာတဲ့အတုိုင်း ထလုပ်ခြင်းသာဖြစ်လေ့ရှိတာမုို့ ပေါ်တူဂီဆုိုတာ (ကျောင်းသမုိုင်းစာအုပ်ထဲသင်ခဲ့ဖူးတဲ့) ငဇင်ကာတုို့နုိုင်ငံဆုိုတာထက်ပုိုပြီး ဘာမှမသိထားပါ။
ဘယ်လုိုသွားရင်ကောင်းမလဲဆုိုပြီး ဟုိုတယ်မှာစုံစမ်းတော့ လေယဉ်နဲ့သွားပါ။ အဲဒီကနေ အော်စလိုကို ပြန်ရင် ဈေး သက်သာမယ်တဲ့။ ကုိုယ့်မှာက ကင်မရာအထုပ်အပုိုးတွေနဲ့၊ လက်မှတ်ကလည်း အော်စလုို-ဘာစီလုိုးနား အသွား-အပြန်ဝယ်ထားပြီးသားဆုိုတော့ အဲဒိအစီစဉ်နဲ့မဖြစ်သေး။ ဒီလုိုဆုို အခုဝယ်-အခုသွား အမြန်ရထားစီးပါတဲ့။ လက် တန်းလုပ်လေ့ရှိတဲ့ ထုံးစံအတုိုင်း ဟုိုတယ်မှာ ကင်မရာနဲ့အထုပ်အပိုးတွေကိုအပ်၊ ခရီးဆောင်အိတ်ငယ်တလုံးကို ယူပြီး ဘူတာမှာ လက်မှတ်ဝယ်တော့ ဘာစီလုိုးနားကနေ မက်ဒရစ်ကို ယူရွန် ၈၀ တဲ့။ မတတ်နုိုင်ဘူး။ ဘာမှကြို ပြင်မထားတော့ ဒီနည်းကိုပဲ ရွေးလုိုက်ရပါတယ်။
အမြန်ရထားဆုိုတာ ရန်ကုန်-မန္တလေးလုို အမြန်မဟုတ်ဘူး။ ကီလုို ၆၀၀ ကျော်ကုို ၂ နာရီခွဲပဲကြာပါတယ်။ ဥရောပရဲ့ အမြန်ရထားလုိုင်းတဲ့၊ ကျဉ်ဆံရထားလုို့ခေါ်ရမလားမသိပါ။ တချို့နေရာတွေဆုို အမြန်နှုန်းက ကီလုို ၃၀၀ ကျော် ပါ တယ်။ အမြန်ရထားလမ်းတွေကုိုသီးခြားဖောက်ထားပြီး လမ်းတလျောက်လုံး ခြံစည်းရုံကာထားပါတယ်။ မကာလုို့ မရ။ တနာရီ ကီလုို ၃၀၀ နှုန်းမောင်းနေစဉ်မှာ တခုခု ခလုတ်တုိုက်တာနဲ့ ရထားမှောက်နုိုင်တယ် မဟုတ်ပါလား။ ရထားက သိပ်မြန်နေတော့ မြင်ကွင်းကုို ကောင်းကောင်းကြည့်ခွင့်မရခဲ့ပါ။ ရေဘူယျအားဖြင့်ကတော့ မြင်ကွင်းဟာ နော်ဝေဖက်ကမြင်ကွင်းနဲ့မတူပဲ အာရှဖက် ဒါမှမဟုတ် အပူပုိုင်းဒေသတွေနဲ့ ပုိုတူနေတယ်ပြောရမလားပါပဲ။
၂ နာရီခွဲပဲစီးရတယ်ဆုိုတော့ နေ့လည် တနာရီလောက်မှာ မက်ဒရစ်ဘူတာကြီးဆီရောက်လာပါတယ်။ ပေါ်တီဂီမြို့ တော် လစ်စဘွန်းသွားမဲ့ရထားကိုမေးကြည့်တော့ ည ၈ နာရီမှထွက်မှာတဲ့။ ပေါ်တူဂီရထားကတော့ ရန်ကုန်-မန္တ လေးရထားလုိုဖြစ်သွားပြီ။ ဟုိုဖက်မှာ အမြန်ရထားလမ်းမရှိသေးပါ။ ဈေးကလည်း တညလုံး အိပ်စင်နဲ့စီးမှ ယူရွန် ၄၀ တည်းရယ်။ ဒါပေမဲ့ ည ၈ နာရီမှထွက်မှာဆုိုတော့ ၆ နာရီလောက် မက်ဒရစ်ကို လည်ပတ်ချိန်ရသေးတာပေါ့။ ထုံးစံ အတုိုင်း အစီစဉ်ကြိုဆွဲထားတာမရှိလေတော့ ဘာစီလုိုးနားကအတုိုင်း နီးစပ်ရာ တုိုးဘတ်စ်ပဲ တက်စီးရတာပေါ့။ အဲ မက်ဒရစ်က ဘာစီလုိုးနားထက်တောင် ဈေးသက်သာနေသေးတယ်။ ၂၄ နာရီအတွက် ၂၀ ယူရုိုတဲ့။ ဘာစီလုိုးနား မှာ ၂၂ တောင်ပေးခဲ့ရပါတယ်။
၅ နာရီလောက်ပဲ လည်ခွင့်ရတာဆုိုတော့ ကားပေါ်ကတောင် မဆင်းဖြစ်ပါဘူး။ တုိုးရစ်တွေလည်လေ့ရှိတဲ့ နေရာ တွေကို လျောက်ကြည့်ပြီး ဘူတာမှာရထားစောင့်ပေါ့။ ရန်ကုန်လုို ဘူတာက တခုတည်းရှိတာမဟုတ်။ လစ်ဘွန်း သွားမဲ့ရထားက နောက်ဘူတာဆုိုလုို့ ကမန်းကတန်း မြေအောက်ရထားနဲ့ ထပ်ပြေးလုိုက်ရပါသေးတယ်။ ရထားက မဆုိုးပါဘူး။ ဘန်ကောက်-ချင်းမုိုင် ရထားနဲ့ခပ်ဆင်ဆင်တူပါတယ်။ အိပ်စင်နဲ့ ၄ ယောက်ခန်းဖြစ်ပေမဲ့ ခရီးသွား နည်း လုို့လားမသိပါ။ တညလုံး ကိုယ်တယောက်တည်း။ တခါမှ မသွားဖူးတဲ့ခရီးမှာ တယောက်တည်းဆုိုတော့ အထီးကျန် သလုိုတော့ဖြစ်သား။ ဒါပေမဲ့ တနေကုန်ပင်ပမ်းထားလုို့ ရထားထွက်ကတည်းက အိပ်ပျော်သွားလုိုက်တာ ကြောက်ဖုို့ အချိန်တောင် မရလုိုက်ပါဘူး။
တရေးနုိုးလာတော့ မုိုးလင်းစပြုနေပြီ။ ပေါ်တူဂီက စပိန်ထက် အချိန်တနာရီနောက်ကျသလုို အခြေခံအဆောက်ဦ တွေ၊ လူနေမှုပုံစံတွေ၊ ၀င်ငွေတွေပါ နည်းနည်းနောက်ကျ ကျန်နေခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။ ဘူတာကြီးမှာ ခဏထုိုင်ပြီး သွားရမဲ့ဟုိုတယ်လိပ်စာကုို ကွန်ပြူတာဖွင့်ရှာတော့ လူတွေ ၀ုိုင်းအုံကြည့်နေပုံက တမျိုးကြီး။ ရေပုလင်းက အစ၊ မုန့် တွေ၊ တခြားပစ္စည်းတွေလည်း စပိန်ထက် ဈေး ၅ ပုံတပုံလောက် သက်သာနေပါတယ်။ တုိုးဘတ်စ်ဆုိုရင် ဘာစီလုိုး နားမှာ ၂၂ ယူရွန်ပေးရပေမဲ့ လစ်စဘွန်းမှာ ၁၆ ယူရွန်တည်းရယ်။
ဘာစီလုိုးနားကနေ ထွက်မလာခင်လေးကမှ ကမန်းကတန်း ဘုတ်ကင်လုပ်လုိုက်တဲ့ ဟုိုတယ်က လစ်စဘွန်းမြို့ထဲ မှာမဟုတ်ပဲ မီနစ် ၄၀ နီးပါး ရထားထပ်စီးရတဲ့ ဟုိုပင်လယ်ကမ်းခြေမှာဖြစ်နေပါတယ်။ ဘာစီလုိုနားက ဘာရုပ်မှ မပေါက်တဲ့ မြို့လယ်ကဟုိုတယ်ခန်းအတွက် ယူရွန် ၁၂၀ ပေးရပေမဲ့ ဒီမှာက ပင်လယ်ကမ်းခြေရှိ ကြယ် ၄ ပွင့်အဆင့် ဟုိုတယ်တောင် ၆၀ ယူရွန်ပဲပေးရပါတယ်။ အပူချိန်ကလည်း ၁၇ တဲ့။ အော်စလုိုက နွေရာသီမှာ ကမ်းခြေတခုဆီ ရောက်နေသလုိုပါပဲ။
ဥရောပသားတွေက ကျောက်တုံးခင်းလမ်းကို အတော်ကြိုက်တဲ့လူတွေ။ အော်စလိုမှာဆုို နန်းတော်ရှေ့က ဂါရုိုဟန် လမ်းမကြီးတခုလုံးကို ကျောက်တုံးခင်းထားသလုို တခြားရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဥရောပမြို့တော် အတော်များများမှာလဲ အဲဒီ လုို ခင်းထားကြတာတွေ့မိပါတယ်။ နေပြည်တော်က ဗုိုလ်ချုပ်တွေသာတွေ့ရင် ကျောက်တုံးတွေအကုန်ခွါပြီး ကွန်က ရစ်လမ်း ခင်းပစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ လစ်စဘွန်းကလဲ ဥရောပထဲကမြို့တော်တခုဆုိုတော့ ဒီမြို့ရဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းတွေမှာ ကျောက်တုံးတွေ ခင်းထားလေရဲ့။
ဟုိုတယ်ရှေ့က ကမ်းခြေမှာ တုိုးရစ်တချုိ့ရေကူးနေပေမဲ့ ကုိုယ်ကတော့ မကူးရဲသေး။ နေစာလှုံရင်း ကမ်းနား တ လျောက်လမ်းသလားရုံမျှသာ။ မြန်မာတွေရဲ့ထုံးစံအတုိုင်း ရောက်လေရာအရပ်မှာ မြန်မာနုိုင်ငံသားတွေ များရှိမလားဆုိုပြီး စနဲနာပေမဲ့ တယောက်မှမတွေ့ပါ။ ဘာစီလုိုးနားမှာလဲမြန်မာတွေကုို မတွေ့မိပါဘူး။ အရင်ရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဥရော ပနုိုင်ငံအားလုံးမှာ မြန်မာတွေနဲ့တွေ့နေကျဆုိုတော့ ဒီမြို့မှာ တခုခုလုိုနေသလုို။
ဒါပေမဲ့ မြန်မာ့အိမ်နီးချင်း ထုိုင်းတွေ ကုိုတော့ ဘာစီးလုိုးနားမှာရော၊ ဒီမြို့မှာတွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာစာမရလဲ ထုိုင်းစာစားမယ်ဆုိုပြီး ထုိုင်းစားသောက်ဆုိုင် တခုဆီဝင်သွားပြီး တုံ့ယန်ကူးနဲ့ ဖတ်ကပေါင်ကုိုင် (ပုဇွန်ဟင်းချုို နဲ့ ကြက်သားကြော်) မှာလုိုက်ပါတယ်။ ဥရောပသွားပြီး အရှေ့တောင်အာရှဆီ လွမ်းနေသူတဦးလုို့ပြောရလေ မလား။
နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ မြို့နဲ့ခပ်လှမ်းလှမ်းရှိ တောတောင်တွေထဲက သဘာဝပန်းခြံတွေ၊ ရဲတုိုက်တွေဆီ သွား လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။ အော်စလိုမှာနှင်းကျနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့ ဒီမှာကတော့ နွေရာသီလုိုဖြစ်နေပြီး နေရာတုိုင်းစိမ်းစိုလှပ၊ သစ်ပင်တွေ၊ ပန်းတွေပွင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကုိုယ်က ဆောင်းခုိုငှက်မဟုတ်။ ဆောင်းခုိုလူဆုိုတော့ ဆောင်း တွင်း ၃ လစလုံး ဥရောပတောင်ပုိုင်း အာဖရိကနယ်စပ်မှာ နေလုို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ။ ငဇင်ကာတုို့ရွာမှာ နှစ်ညပဲအိပ်ပြီး လာလမ်းအတုိုင်း လှည့်ပြန်ခဲ့ရပါတော့တယ်။ ။
7:16 AM Htet Aung Kyaw No comments
သူ့ကို ကလောင်ဆရာဝန်လို့ ခေါ်တယ်။ နောက်ပြီး မန္တလေးရောက် ရှမ်းတစ်ယောက်လဲ သူပါပဲ။
`ကလောင်သွားဟာ လှံသွား ဓါးသွား၊ လက်နက်သွားထက် ထက်တယ်` လို့ ဆိုရိုး ရှိတယ်။ လက်နက်ကိုင်တဲ့သူ တချို့ ကတော့ ကလောင်သွားက လူကို ထိုးသတ် နိုင်တာမှ မဟုတ်တာ၊ ငါတို့ လက်နက် ကသာလျှင် လူကို သေအောင် လုပ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုကောင်း ဆိုမယ်။ လက်နက်သွားက အစဉ်ထာဝရ မပစ်ခတ်၊ မသတ်ဖြတ်နိုင်ပါဘူး။ လက်နက်ကိုင်တဲ့သူ လည်း အသက် တစ်ရာ အထိ သက်တမ်း မရှည်နိုင်ဘူး။
ကလောင်သွား ကတော့ သဘောတရားတစ်ခု စာရွက်ပေါ် ချပြ သွားခဲ့ရင် အဲဒီ စာသား အတိုင်း ဆွေစဉ်မျိုးဆက်များစွာ လက်ခံ ကျင့်သုံး သွားနိုင်တယ်။ အကယ်၍ ကလောင်သွား တစ်ခုက အဲဒါ မင်းတို့ရဲ့ ဘိုးဘွားပိုင်မြေတွေ လို့ ဆိုထားခဲ့ရင် နောင်လာ နောက်သားတွေက အဲဒီ နယ်မြေကို ပြန်လည် လုယူမှု တိုက်ယူမှုကြောင့် ကမ္ဘာချီ စစ်ပွဲကြီးတောင် ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ကလောင်သွားကို ဘယ်သူကမှ အထင်မသေးဝံ့ပါ။
တကယ်တော့ ဆရာဝန်ဆိုရင် ဆေးထိုးအပ်ကိုင်ရမှာပါ။ ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်က တော့ ကလောင်ကိုင်တဲ့ ဆရာဝန် လို့ ဆိုရမှာပဲ။ ဒါလည်း မျိုးရိုးကြောင့် ထင်ပါရဲ့။ ဒေါက်တာ စိုင်းခမ်းလိတ်တို့ရဲ့ ဖခင် လုံးခမ်းကာတုန်ဟုန်းဟာ ရှမ်းစာပေလင်္ကာ ရေးဖွဲ့တတ်တဲ့သူ တစ် ယောက်ဖြစ်တယ်။ မိခင်က ဒေါ်နန်းစိန်ဥကတော့ မိခင်ကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဒေါက်တာ စိုင်းခမ်းလိတ်လောင်းလျာကို ၁၉၄၉ ခု ဧပြီလ ၂၇ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့တယ်။ ဇာတိက ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း သိန္နီပါ။
စိုင်းတုမ်ခမ်း၊ စိုင်းခမ်းလိတ်၊ စိုင်းခမ်းသီ၊ နန်းအွမ်ခမ်း ဆိုပြီး မွေးချင်း လေးယောက်ရှိ တယ်။ သူတို့ ညီအစ်ကို သုံးယောက်စလုံး ဖခင်ရဲ့အနုပညာအမွေကို ရရှိတဲ့ သူတွေပါ။ အစ်ကိုကြီး စိုင်းတုမ်ခမ်းက ရှမ်းခေတ်သစ် သီချင်းတွေကို ရေးသားတဲ့သူ ဖြစ်တဲ့ အပြင် သူ တတ်သမျှ သိသမျှ ညီဖြစ်သူ စိုင်းခမ်းလိတ်ကို သင်ပေးခဲ့သူပါ။ သီချင်း စာသား များဟာ ရေးစပ်သူရဲ့ စိတ်ထားကို တစွန်းတစ ဖေါ်ပြစမြဲပါ။ စိုင်းတုမ်ခမ်း ရေးသားတဲ့ ရှမ်းသီချင်း တစ်ပုဒ်ကတော့ ဒို့အမျိုးသား တာဝန်မို့ ရှောင်လို့ မရပါ သီချင်း အရ သူဟာ အမျိုးသားရေး အတွက် တာဝန်ကို ဦးလည်မသုန် ယူတတ်သူ ဖြစ်ကြောင်း ပြသလျှက်ပါ။ စိုင်းခမ်းလိတ်လည်း စိုင်းတုမ်ခမ်းထံက ဝေါဟာရ အသစ်အဆန်း ရှာဖွေနည်းကို ရယူခဲ့ သည့်အပြင် သံစဉ်ရှာနည်း၊ အတွေးအခေါ် အယူအဆ ယူနည်း များကို ကောင်းစွာ ရရှိ ခဲ့တယ်။
ဖခင်ဖြစ်သူက တာဝန်အရ သိန္နီကနေ နမ္မတူမြို့ကို ပြောင်းလာ ရတဲ့ အတွက်ကြောင့် သူတို့ ညီအစ်ကိုလည်း နမ္မတူကို ရောက်လာတယ်။ ၁၉၅၄ ကတည်းက စိုင်းခမ်းလိတ်ဟာ နမ္မတူ မူလတန်းကျောင်းကို ပန်ဟိုင်း (နမ္မတူ) မှာ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ကျောင်းသား နာမည်က တော့ Louvis Kham လူးဗစ်ခမ်း တဲ့။
နမ္မတူမှာ သတ္တမတန်းကို အောင်မြင် ပြီးတဲ့နောက် ၁၉၆၃ ခုမှ ပြင်ဦးလွင် (ယခင်မေမြို့) St. Albert High School (ယခု ပြင်ဦးလွင် အမှတ် ၂) မှာ အဋ္ဌမတန်း တက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာ တွဲဖက်ကောင်းဖြစ်တဲ့ ကျောင်းသူ မနွဲ့နွဲ့တင်နဲ့ စတင် တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ သူတို့ နှစ်ဦးရဲ့ တွေ့ဆုံမှု ဇာတ်လမ်းဟာ လူအများ စိတ်ဝင်စားခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။
နွဲ့နွဲ့တင်ကတော့ စာတော်တဲ့သူ ဖြစ်ပြီး အတန်းထဲမှာ ပထမနေရာ ယူခဲ့တဲ့သူပါ။ အဋ္ဌမတန်း တုံးက လူရည်ချွန်အဖြစ် အရွေးခံ လိုက်ရသေးတယ်။ လူရည်ချွန် ဖြစ်ရင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက လူရည်ချွန်မောင်မယ်များကို ဒေသန္တရ ဗဟုသုတရစေရန် မြန်မာပြည်ထင်ရှားတဲ့ ဒေသများ စက်ရုံများ၊ ငပလီ အပမ်းဖြေကမ်းခြေ စတာတွေကို ခေါ်သွားတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်းမှာတော့ အင်းလေး မှာတော့ ခေါင်တိုင်လူရည်ချွန်စခန်း တစ်ခု ယခင်က ရှိခဲ့ဖူး တယ်။ လူရည်ချွန်အရွေးခံရတဲ့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူဟာလည်း ထက်မြက်တဲ့ ကျောင်းသူ ကျောင်းသား အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရတယ်။
လူရည်ချွန်ဖြစ်ဖို့အတွက် ဉာဏအားလည်း ကောင်းရသလို၊ ကျန်းမာရေးလည်း ကောင်းရမယ်၊ ပြီးတော့ စာလည်း တော်ရမယ်၊ ဘက်စုံ ထူးချွန်ရမယ်ပေါ့။ လူရည်ချွန် အင်တာဗျူးမှု တစ်ခုကတော့
` စေတီရင်ပြင်တော် အရောက် လှေခါး ဘယ်နှစ်ထစ် ရှိသလဲ` စသဖြင့် မေးတတ်တာ ပေါ့။ သာမန်လူ ဆိုရင် ဘယ်သူက လှေခါးထစ်တွေကို ရေတွက် ထားမလဲ။ သို့သော် လူရည်ချွန် ဖြစ်မယ့် ကျောင်းသား ကတော့ ဒီလို အဖြေပေးလိုက်တယ်။
`ကျွန်တော် ဓါတ်လှေခါးနဲ့ တက်ခဲ့တာပါ ဆရာ` တဲ့။ အဲဒါ ကတော့ ဉာဏ်ရည်ကို စမ်း တာပါ။ ဥပမာ ကောင်းကင်ပေါ်မှာ မိုးရေ ကလွဲလို့ ဘာအရည်တွေ ထပ်ရှိသေးသလဲ လို့မေးရင် ချက်ချင်း မဖြေတတ်ကြဘူး။ လူရည်ချွန်လေးတွေကတော့ ဒီလိုဖြေကြတယ်။
`အုန်းရည်၊ ထန်းရည် ပါဆရာ`တဲ့။
လူရည်ချွန်ဖြစ်တဲ့ နွဲ့နွဲ့တင် ကတော့ ရုပ်လှတယ်။ စာတော်တယ်။ အဲဒီခေတ်တုံးက ကျောင်းမှာ စူပါစတားပေါ့။ ကျောင်းသားတွေ အားလုံး နွဲ့နွဲ့တင်ကို အားကျသလို စိုင်းခမ်းလိတ် တစ်ယောက်လည်း သူများ နည်းတူ နွဲ့နွဲ့တင်ကို အားကျမိသူပါ။
သူတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ပွဲဦးထွက် ဇာတ်လမ်း တစ်ပုဒ်ကတော့ ကျောင်းနံရံကပ်စာစောင် ကနေ စခဲ့တယ်။ နံရံကပ်စာစောင် ဆိုတာက စာပေဝါသနာပါတဲ့ ကျောင်းသားတွေ လွတ်လပ် စွာ ကဗျာ၊ ဆောင်းပါး၊ ဝတ္ထုတိုတွေ ရေးပြီး ဆရာဆရာမများက ရွေးချယ်ပြီး ကောင်းတဲ့ဟာ တွေကို ကျောက်သင်ပုံးမှာ လှပစွာ ပြန်လည် ကပ်ထားပေးတယ်။ ကျောင်းသူကျောင်းသား တွေက ဝိုင်းကြည့်ကြတာပေါ့။ အဲဒီ နံရံကပ် စာစောင်မှာ စိုင်းခမ်းလိတ်က ကဗျာလေး တစ်ပုဒ် ရေးကာ သွား ကပ်ထား လိုက်တယ်။ သူ့ရဲ့ ခံစားချက်ကို တင်ပြတာပါ။ ဒါပေမယ့် သူတင်ပြချက် ကတော့ အသွား နှစ်ဖက် ရှိတဲ့ ကဗျာလေးပါ။ ကဗျာခေါင်းစဉ် ကိုက လူရည်ချွန်ကို ရအောင်ယူမည် တဲ့။ ကျောင်းသားတွေ အဲဒီ ကဗျာလေးကို ဖတ်ပြီးတော့ ဟိုးလေးတကျော် ဖြစ်သွားတာ ပေါ့။ လူသတင်း လူချင်းဆောင် ဆိုသလို နွဲ့နွဲ့တင်လည်း ကြားသိ သွားတယ်။
စုံစမ်းကြည့်တော့ ရေးတဲ့သူက စိုင်းခမ်းလိတ်ဖြစ်နေတော့ ဆရာဆရာမတွေ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေ အားလုံး အဲဒီ အကြောင်းကို စိတ်ဝင်စား နေကြတယ်။ နွဲ့တင်ကတော့ မိန်းမသား တစ်ယောက် အနေ နဲ့ သူမကို ယခုလို စောင်းလား ချိတ်လား တင်စီးပြီး ရေးထား တာကို မြင်ရတော့ မခံချင်တာ အမှန်ပါ။ ဒီကျောင်း တစ်ကျောင်းလုံးမှာ သူမ တစ်ယောက်ထဲသာ လူရည်ချွန် ဖြစ်နေလေတော့ စိုင်းခမ်းလိတ်က သူမကို ရည်ရွယ်ပြီး တမင် သက်သက် ရေးတဲ့အကြောင်း ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးကို သွားတိုင် ပါလေရော။ ဒီကိစ္စကို ကျောင်းအုပ်ကြီး ကိုယ်တိုင် စိုင်းခမ်းလိတ်ကို ရုံးခန်းမှာ ခေါ်တွေ့တယ်။ စိုင်းခမ်းလိတ်က ပြုံးပြုံးနဲ့ပဲ အဖြေပေးလိုက်တယ်။
`ကျွန်တော် သူမလို လူရည်ချွန် ဖြစ်ချင်လို့ လူရည်ချွန်ကို ရအောင်ယူမယ်လို့ ရေးတာဟာ ကျွန်တော်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပါ` တဲ့။ ဒီလိုနဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ပြဿနာလည်း ပြေလည် သွားတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်လည်း ခင်မင်ရင်းနီး သွားတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းအစ လူရည်ချွန်ကလို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။
ရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့အတိုင်း နဝမတန်း ရောက်တော့ စိုင်းခမ်းလိတ်လည်း လူရည်ချွန် အဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတယ်။ နွဲ့တင်ကလည်း လူရည်ချွန် နှစ်ထပ်ကွမ်း ဖြစ်ပြန်တယ်။ (ဒဿမတန်းလည်း နွဲ့နွဲ့တင်က လူရည်ချွန် သုံးထပ်ကွမ်းအဖြစ် ထပ်မံ ရွေးချယ်ခံရပြန်တယ်) မေမြို့ လူရည်ချွန်အနေနဲ့ သူတို့ နှစ်ယောက် လူရည်ချွန် ခရီးအဖြစ် အတူတူ သွားလာ ကြရလို့ ပိုပြီး ခင်မင်ရင်းနီး လာပါတော့တယ်။
မေမြို့မှာ ကျောင်းတက် ကတည်းက စိုင်းခမ်းလိတ်ဟာ ရှမ်း၊ မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ်ကဗျာ များကို ရေးစပ်နိုင်ခဲ့တဲ့သူပါ။ ၁၉၆၅ ခု မှာတော့ စိုင်းခမ်းလိတ်က နမ္မတူမှာ ဒဿမတန်း ပြန်လာ တက်ရတယ်။ ဖခင်ဖြစ်သူ လုံးခမ်းကာလည်း သူ့သား ဝါသနာပါတဲ့ စာပေ အနုပညာကို အားပေးခဲ့တယ်။ ညီဖြစ်သူ စိုင်းခမ်းသီလည်း အစ်ကိုကို ဂစ်တာတီးဖို့ သင်ပေး လိုက်ပြန်တော့ ဂီတာတီးကာ (ဟတ်နိုင်းဖန် = အိပ်မက်ထဲကအချစ်) ဆိုတဲ့ ရှမ်းသီချင်းကို စပ်ဆိုနိုင်ခဲ့တယ်။
ဘာမဆို အကြောင်းရှိမှ အကျိုး ဖြစ်ပေါ်လာ စမြဲပါ။ စိုင်းခမ်းလိတ် သီချင်းရေးဖြစ်တာက ဒီလိုပါ . . .
ဝါတွင်းကာလ ဥပုသ်သည်များ အတွက် လူပျို အပျိုများက ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဝေယျာဝစ္စ သွားလုပ်ကြတယ်။ ဆွမ်းတော် ပြင်ဆင်ကြရသလို ဥပုသ်သည် အတွက်လည်း ထမင်းဟင်းတွေ ချက်ကြတယ်။ အဖိတ်ညမှာ ထမင်း ချက်ပြီးတဲ့နောက် လူပျိုတွေက ဆွမ်းစား ကျောင်းမှာ ညအိပ်စောင့် ကြရတယ်။ တချို့ ကတော့ ဂစ်တာယူလာပြီး သီချင်း ဆိုကြ ပျော်ကြ တာပေါ့။ အဲဒီအချိန်မှာ ရှမ်းခေတ်သစ်သီချင်း နှစ်ပုဒ် သုံးပုဒ် လောက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ အဖိတ်နေ့ တိုင်း အဖွဲ့တွေ စုံတိုင်း သီချင်းဟောင်းတွေ ကိုပဲ ဆိုနေတော့ စိုင်းခမ်းလိတ်က မေးတယ် `ရှမ်းသီချင်း အသစ် မရှိတော့ဘူးလား` သူတို့ကလဲ `ဒါပဲရှိလို့ ဒါပဲ ဆိုနေတာပေါ့` တဲ့။ ဒီလိုနဲ့ စိုင်းခမ်းလိတ်က ရှမ်းသီချင်းတွေ ဖြစ်လာဖို့ အကောင်အထည် ဖေါ်ကြည့် တော့တယ်။
မေမြို့မှာနေတုံးက The Beatles, Shadows, Bob Dylan, Elvis Presley, The Rolling Stones, Elton John, Pink Floyd, Eric Clapton, CCR စတဲ့ နာမည်ကြီး အင်္ဂလိပ် သီချင်းတွေ နားထောင်ဖူးတဲ့အတွက်ကြောင့် ရှမ်းစာသားတွေနဲ့ အင်္ဂလိပ်သံစဉ်မှာ ထဲ့လိုက်ရင် ပရိသတ်တွေ ကြိုက်ကြမှာပဲ ဆိုပြီး ကော်ပီ သီချင်း အပုဒ် (၂၀) လောက် စပ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဂစ်တာ တီးပြီး သူငယ်ချင်းတွေကို ဆိုပြတယ်။ ဘယ်အပုဒ်ပဲ ဆိုပြ ဆိုပြ သူငယ်ချင်း တွေရဲ့ တုံ့ပြန်မှုက `ကောင်းပါတယ်` ပြောပြီး ဒီအတိုင်းပဲ တန့်နေတော့တယ်။ ဘယ်သူမှလဲ အဲဒီ သီချင်းတွေကို ယူပြီး မဆိုကြဘူး။
စိုင်းခမ်းလိတ်က စဉ်းစား သဘောပေါက်မိတယ်။ သူများရဲ့ ကော်ပီ သံစဉ်နဲ့ ရှမ်းသီချင်း ရေးစပ်တာ အသံက ကွက်တိ မဖြစ်ဘူး။ အသံ မပီပြင်ဘူးပေါ့။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်လဲ ဖြစ်အောင် အသံလည်း ပီပြင်အောင် တစ်ယောက်တည်း ကြံစည်နေတော့တယ်။ ကော်ပီ သံစဉ်ကို လုံးဝ အသုံးမချဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
၁၉၆၆ မှာတော့ နမ္မတူကနေ ဒသမတန်းကို ရူပဗေဒ ဂုဏ်ထူးနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ကျောက်မဲ မြို့နယ်မှာ ပထမရကာ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ အမှတ်အများဆုံးရတဲ့ ထူးချွန် ကျောင်းသား ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် မန္တလေး ဆေးတက္ကသိုလ်ကို တက်ခွင့် ရတယ်။
ဆေးကျောင်းသားဘ၀ နှင့် တာဝန်
နွဲ့နွဲ့တင်လည်း ဆယ်တန်းကို ဂုဏ်ထူးနဲ့အောင်ပြီး မန္တလေး ဆေးတက္ကသိုလ်ကို တက်ခွင့် ရလေတော့ သူတို့နှစ်ယောက် မန်းမြေ MC မှာ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ဖို့ ဖန်လာပြန်တယ်။ ဝါသနာဆိုတာ တားလို့မရပါ ဆိုတဲ့အတိုင်း အနုပညာဝါသနာပါတဲ့ စိုင်းခမ်းလိတ် ကတော့ ဆေးကျောင်းသားဘဝ ရောက်နေသော်လည်း သီချင်း ရေးနေဆဲ၊ ကဗျာစပ်နေဆဲ၊ သီချင်းဆို နေဆဲ။ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် အတွက်လည်း မလျှော့သောဇွဲနဲ့ အားထုတ် နေဆဲပါ။
သီချင်းရေးတဲ့နေရာမှာ ပရိသတ်အကြိုက် သီချင်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်လာဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ မလွယ်ဘူး ဆိုပေမယ့် စိုင်းခမ်းလိတ်ကတော့ အခက်အခဲကို ကြောက်ရွံ့သူ မဟုတ်ချေ။ ကြိုးစားရင် ဘာမဆို ဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက် သူ့ရင်မှာ အမြဲ ကိန်းအောင်း နေလေတော့ တစ်ယောက်တည်း ကြိုးစားခဲ့ရာ ၁၉၆၈ ခုနှစ်ရောက်မှ ရှမ်းလူငယ်များ သဘောခွေ့ မနော တွေ့တဲ့ (ဟိုက်မီးစိုင်ဟတ်ခေး = မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်ရှိပါစေ) နဲ့ (လောင်ယဉ်ငေ့တိုင်း ဟိုက်ခွတ် ပန် = ရှမ်းယဉ်ကျေးမှု ခေတ်မီပါစေ) ဆိုတဲ့ သီချင်းနှစ်ပုဒ်ကို အောင်မြင်စွာ စပ်ဆိုနိုင်ခဲ့တယ်။
သီချင်းစာသားများဟာ ရေးစပ်သူရဲ့ အတွင်းသဘောကို ဖော်ဆောင်နေခြင်းပါ။ စိုင်းခမ်းလိတ်ရဲ့ သီချင်းထဲမှာ ရှမ်းလူငယ်များကို အမျိုးသားဝတ်စုံ ဝတ်ဖို့ မြတ်နိုးဖို့ တိုက်တွန်း ထားသလို သူ ကိုယ်တိုင်လည်း အမြဲတမ်း ရှမ်းဘောင်းဘီ ရှမ်းတိုက်ပုံနဲ့ပဲ ဆေးကျောင်းပြီးခဲ့တဲ့ သူပါ။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝတုံးကလည်း ရှမ်းတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများကို ဦး ဆောင်ပြီး ရှမ်းစာပေ ယဉ်ကျေးမှု လုပ်ငန်းများကို အမျိုးသားရေး တာဝန်တစ်ရပ်အနေဖြင့် အစဉ်ကူညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ မန္တလေးတက္ကသိုလ် ရှမ်းစာပေ ယဉ်ကျေးမှုရဲ့ အတွင်းရေးမှူး တာဝန်ကိုလည်း ယူခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ၁၉၆၉ ခုနှစ်မှာ မန္တလေး တက္ကသိုလ် ရှမ်းစာပေယဉ်ကျေးမှု ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နဲ့ တောင်ကြီးမြို့မှာ ကျင်းပတဲ့ ရှမ်းစာပေ ဆွေးနွေးပွဲကို တက် ရောက်ခဲ့ပြီး လင်းခေးသား စိုင်းထီးဆိုင်နဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့တယ်။
တောင်ကြီးမှာ သူတို့နှစ်ယောက် သိစတုံးက ရိုးရိုးပဲခင်မယ်လို့သာ ထင်ခဲ့တယ်။ သူတို့ နှစ်ယောက် ခင်မင်ကြပြီး ယခုလို အနုပညာ စင်မြင့်မှာ အတူ တက်လှမ်း ကြရလိမ့်မယ်လို့ မထင် ထားခဲ့ မိဘူး။ အစတုံးကတော့ စိုင်းခမ်းလိတ်က စိုင်းဖုန်းကျော် (ခေါ်) စိုင်ခမ်းမတ် (တန့်ယန်း) ရဲ့ အသံကို သဘောကျခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ထင်ခဲ့တဲ့ အတိုင်း ဖြစ်မလာခဲ့ဘူး။ စိုင်းထီးဆိုင် ဆယ်တန်းအောင်ပြီး ဒဿနိကဗေဒ ယူတော့ မန္တလေးတက္ကသိုလ် လာတက်ရင်း စိုင်းခမ်းသီနဲ့ ခင်မင်ခဲ့ ကြတယ်။ ညီလေးရဲ့ သူငယ်ချင်း ဆိုတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပိုမိုပြီး ခင်မင် ရင်းနီးလာတော့တယ်။ စိုင်းခမ်းသီလည်း အနုပညာပါရမီ ရှိသူ တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့အတိုင်း သီချင်းကောင်းတွေ တော်တော်များများ ရေးစပ် နိုင်ခဲ့တယ်။
အဲဒီအချိန်ကတော့ ခေတ်လူငယ်တွေ ဂီတာကို စတင် ဝါသနာပါလာချိန်ပဲ။ တီးဝိုင်းတွေလဲ တစ်ဖွဲ့ပြီး တစ်ဖွဲ့ ပေါ်လာစပါ။ ၁၉၇၃ ခုမှာတော့ စိုင်းခမ်းလိတ်၊ စိုင်းထီးဆိုင်၊ ခွန်မျိုးလွင်၊ စောသိမ်းဝင်းတို့ရဲ့ အဖွဲ့ The Outsiders နဲ့ စိုင်းခမ်းသီ၊ စောဂျွန်ဆင်၊ စောဂျော်နီတို့ရဲ့ အဖွဲ့ The Highlanders ပေါင်းမိကြပြီး မြန်မာပြည်မှာ နာမည်ကြီးလာတဲ့ The Wild Ones အဖွဲ့ ဖြစ်လာတော့ တာပါပဲ။
စိုင်းခမ်းလိတ်ဟာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဘဝမှာ ရှမ်းစာပေ ယဉ်ကျေးမှု တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်သည့်အပြင် သီချင်းရေးစပ်မှု၊ သံစဉ် အသွားအလာများ ကိုလည်း ဉာဏ်မီသမျှ လေ့လာခဲ့သည်။ အသိဉာဏ် ကြွယ်ဝဖို့ အတွက် အတွေးအခေါ် စာပေများ ကိုလည်း လေ့လာ ဖတ်ရှုခဲ့တယ်။ ဆေးတက္ကသိုလ် တက်သော်လည်း တက္ကသိုလ်ပညာရပ် တစ်ခုထဲ ကိုသာ လေ့လာခဲ့သည် မဟုတ်၊ ဗဟုသုတမျိုးစုံကို လေ့လာ ဆည်းပူး ခဲ့တယ်။
လေးနက်တဲ့ သီချင်းကို ရေးသားနိုင်ဖို့ အတွက် ကမ္ဘာကျော် တေးသီချင်းများကိုလည်း နားထောင်ပြီး မှတ်သား နည်းယူ ခဲ့သူပါ။ ဒီ့အပြင် မြို့မငြိမ်း၊ ရွှေပြည်ဧ၊ ဦးဗိုလ်ခင်၊ ဦးအံ့ကြီး၊ ဦးကျော့မှူးစတဲ့ မြန်မာ အနုပညာရှင်များရဲ့ သီဆို ဖွဲ့ဆိုမှု ကိုလည်း သေချာစွာ လေ့လာ ခဲ့သေးတယ်။ ကဗျာ၊ ဝတ္ထု၊ အဆိုအမိန့်တွေပါ မကျန် ဖတ်နိုင်သမျှ မှတ်နိုင်သမျှ အချိန်လုပြီး လေ့လာ ခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြတဲ့ Rabindernath Tagore, Robert Frost, Omar Khayyam, Shakespeare, George Bernard Shaw, Ibsen, Leo Tolstoy, Somerset Mangham, Mark Twain, Albert Camus, Henry David Thoreau, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Mao Zedong, Jesus Christ, The Buddha တို့ရဲ့အကြောင်း သူတို့ရဲ့ အတွေးအခေါ် အဆိုအမိန့်များကို လေ့လာခဲ့တယ်။
သီချင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာဖို့အတွက် အသိပညာကြွယ်ဝရမယ်၊ အတွေးအခေါ် သူများထက် သာရမယ်။ အတွေးအခေါ် ရှိဖို့အတွက် စာကောင်း ပေမွန်များကို လေ့လာမှတ် သားနိုင်ရမယ်။ စိုင်းခမ်းလိတ် ကတော့ အင်္ဂလိပ်စာပေများကို လေ့လာ လိုက်စားရုံတင်မက မြန်မာစာပေများကိုလည်း များစွာ ဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့တယ်။ ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ၊ ရှင်မဟာသီလဝံသ၊ လက်ဝဲသုန္ဒရ၊ အနန္တသူရိယ၊ နဝဒေး၊ နတ်သျှင်နောင်၊ ဦးကြင်ဥ၊ စလေဦးပုည၊ သခင်ကိုယ် တော်မှိုင်း၊ ဇော်ဂျီ၊ မောင်စွမ်းရည်၊ ဒဂုံတာရာ၊ မောင်သာနိုး၊ သိပံ္ပမောင်ဝ၊ တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်၊ လူထုဒေါ်အမာ၊ အောင်သင်းတို့ရဲ့ စာပေများကိုလည်း စိုင်းခမ်းလိတ် မြတ်မြတ်နိုးနိုး ဖတ်ရှုခဲ့တယ်။
တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ သူတစ်ပါးရဲ့ စာပေကို တတ်မြောက်ပြီး မိမိရဲ့ စာပေကို မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် ဖြစ်တတ်ကြသော်လည်း စိုင်းခမ်းလိတ် ကတော့ အဲဒီ အမျိုးအစား ထဲက မဟုတ်ပါဘူး။ သူရေးတဲ့ ရှမ်းသီချင်းတွေထဲက သူ့ရဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ကို ဖော်ညွှန်း နေတာ များစွာတွေ့ရပါမယ်။ ရှမ်းစာပေ ဝေါဟာရ ကြွယ်ဝဖို့ စဝ်ကန်းဆေ၊ လုံးခွန်မဟာ၊ လုံးတန်းကေး၊ ဆရာဦးစိုင်းအောင် ထွန်းတို့ရဲ့ စာပေများကိုလည်း ဖတ်ရှုလေ့လာခဲ့သေးတယ်။ လူဆိုတာ စာဖတ်များရင် အသိ ဉာဏ်လည်း များလာတာပါပဲ။ အသိဉာဏ်များလာရင် အတွေးအခေါ်လည်း ကောင်းလာမယ်၊ အပြောအဆို အရေးအသားတွေလည်း ကောင်းလာမယ်။ ဘာကြောင့် ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ် ရေးသားတဲ့ စာသားတွေ အဆင့်မြင့်သလဲဆိုတာ စာဖတ်သူတို့ နားလည်မှာပါ။
စိုင်းခမ်းလိတ်ဟာ ဘယ်သူကမှ သူ့ကို အသိအမှတ် မပြုခင် ကတည်းက သီချင်းကို ရေးစပ်ခဲ့ တာပါ။ အခုမှသာ သူရေးတဲ့ သီချင်းစာသားတွေ ခန့်ညားကြောင်း ကျုပ်တို့ သိရပေမယ့် သူ သီချင်းရေးစပ် သီကုံးနေချိန်မှာ သီချင်းသံစဉ် ရှာနေချိန်မှာတော့ ဘယ်သူကမှ သူ့ကို သတိထားမိမှာမဟုတ်ဘူး။
သူသီချင်းရေးတဲ့နေရာကတော့ အရှိန်အဝါကြီးတဲ့ လျှပ်စစ်မီးအောက်မှာ မဟုတ်ဘဲ မီးမလင်းထိန်တဲ့ ဖယောင်းတိုင် အလင်းရောင်အောက်မှာ၊ တစ်ခါတစ်လေ လရောင်အောက်မှာသာ ရေးစပ်ခဲ့ တာပါ။ သူထိုင်ပြီး သီချင်းရေးခဲ့တဲ့ ထိုင်ခုံကတော့ မွေ့ယာဆိုဖာ ထိုင်ခုံတွေ မဟုတ်ဘဲ သင်ဖြူးဖျာစုတ် နဲ့ ပေါက်ပြဲနေတဲ့ ကျမ်းခင်း အဝါရောင်သမ်းနေတဲ့ မြက်ချောက်တွေပါ။ သူ့သီချင်းရေးတဲ့ ဖောင်တိန် ကလည်း ရွှေကလောင်မဟုတ်၊ ခဲတံတိုလေး ဒါမှမဟုတ် မကြာခဏ မှင်စိမ့်ထွက်နေတဲ့ ဖောင်တိန်စုတ်ပါ။ သံစဉ်တွေကို ရှာနေတဲ့ သူ့ရဲ့ ဂီတာကလည်း လျှပ်စစ်ဂီတာမဟုတ်ဘဲ ကြိုးပြတ်နေတဲ့ ဂီတာစုတ်ပါ။ သူ့ရဲ့ သီချင်းရေးတဲ့ စာရွက်ကလည်း ဖြူလွင်နေတဲ့ လျှောက်လွှာ စာရွက်မဟုတ်ဘဲ သူများ လွင့်ပစ်ထားတဲ့ ရည်းစာ ရေးထားတဲ့ စာရွက်ဟောင်းတွေပါ။ သူသီချင်းရေး တေးသံစဉ်ရှာနေတဲ့ အချိန် သူ့အနားမှာ လာထိုင်ပြီး အားပေးနေတာကတော့ လှပ ကျော့ရှင်းတဲ့ သူဌေးသမီးမဟုတ်။ သူ့အနားမှာ အမြဲတမ်း ရစ်သီ နေတာကတော့ ခြင်နဲ့ ယင်ကောင်တွေပါ။ စည်းနဲ့ဝါး သံစဉ်ရှုာဖို့အတွက် Drum Set မဟုတ်ဘဲ လက်မနဲ့ လက်ခလယ် ကိုသာ အသုံးပြု ခဲ့တယ်။ အဲဒါကတော့ နာမည်ကြီး သီချင်းရေးဆရာ မဖြစ်ခင်က သူ့ဘဝရဲ့ သန္ဓေအောင်းတဲ့ ကာလလို့ ဆိုရပါမယ်။ သူ့ရဲ့ ရှမ်းကဗျာလေး တစ်ပုဒ် ကလည်း ဒီလို ဆိုထားတယ်။
အစကတော့ စိုင်းခမ်းလိတ်က ရှမ်းသီချင်းတွေပဲ ရေးဖြစ်တာပါ။ မြန်မာသီချင်း ရေးဖြစ်တဲ့ အကြောင်းကတော့ ဒီလိုတဲ့။ တစ်နေ့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ သွားထိုင်နေတုံး သီချင်း တစ်ပုဒ်ကို ကြားရတော့ နားထဲမှာ အဲဒီသံစဉ်က အင်မတန် ရင်းနီးနေတယ်။
သီချင်းကတော့ ကိုလေးလွင်ရေးပြီး လားရှိုးသိန်းအောင် (ဂျင်မီဂျက်) ဆိုထားတဲ့ `လယ်သူမလေးချစ်သူ` ဖြစ်တယ်၊ အင်္ဂလိပ်စာသား နဲ့ပါ အတူ ဆိုထားတော့ မူရင်း အင်္ဂလိပ်သီချင်းလို့ ထင်နေရတယ်။ အဲဒီမှာ သူငယ်ချင်းတွေက ပြောလာတယ်။ စိုင်းခမ်းလိတ် ရေးတဲ့ သီချင်းက သူများရဲ့ သံစဉ်ကနေ ရှမ်းသီချင်း ရေးထား တာပါတဲ့။ အမှန်မှာတော့ အဲဒီ လယ်သူမလေးချစ်သူ သံစဉ်က စိုင်းခမ်းလိတ်ရဲ့ ရှမ်းသီချင်း (ယိင်းအွန်ဟတ်စိုင်း) သံစဉ်ကို ယူပြီး လုပ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။
အဲဒီကစပြီး စိုင်းခမ်းလိတ် ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခု ချလိုက်တယ်။ ငါလည်း ဗမာသီချင်း ရေးနိုင်ပါတယ်။ ရေးကို ရေးရမယ်. . . တဲ့။ ဒီလိုနဲ့ ဗမာသီချင်း စရေးဖြစ်ခဲ့တာပါ။ (ယိင်းအွန်ဟတ်စိုင်း) ရှမ်းသီချင်းကို ဗမာလို ပြန်ရေး တဲ့အခါ လူကြိုက်များတဲ့ ဟိုတုံးက မတွေ့မိရင် ကိုယ်တို့ ဇာတ်လမ်းလေးဟာလေ တစ်မျိုးဖြစ်ခဲ့မယ် ဆိုတဲ့ “အချစ်ကိုဦးစားပေး“သီချင်းပါပဲ။
စာရေးဆရာ သီချင်းရေးဆရာတွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ကတော့ သူများဖတ်ဖို့ နားဆင်ဖို့ပါ။ စိုင်းခမ်းလိတ်လည်း မိမိရေးသားတဲ့ သီချင်းတွေ အများပြည်သူ နားဆင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ တယ်။ ဂီတာနဲ့ တီးပြီး ခေတ်သစ်သီချင်း တစ်ခေတ် စတင်ပြောင်းတဲ့ အချိန်ကာလ ဖြစ်နေလို့ ပရိသတ်တွေ ချက်ချင်း လက်မခံနိုင်လို့ တစ်ခါတစ်လေ စိတ်ဓါတ်ကျမှု ဖြစ်ခဲ့ပါရဲ့။ ဒါပေမဲ့ စိုင်းခမ်းလိတ်က သူများနဲ့ မတူခဲ့ဘူး။ သူများက မကောင်းဘူး ပြောရင် ကောင်းအောင် ငါ ကြိုးစားမယ်၊ အဖန်တစ်ရာမက ကြိုးစားမယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ် အပြည့်အဝ ရှိတယ်။ သူ့သီချင်း ထဲမှာလည်း ရှိတယ်လေ `တစ်ခါလဲရုံနဲ့ အပြီးထိုင်လိုက်တော့မှာလား အကျိုးရယ်မှ မဟုတ်သေးပဲ` တဲ့။
ပရိသတ်များ လက်ခံလာအောင် နည်းမျိုးစုံ ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ပထမဦးဆုံး ထွက်တဲ့ `ချစ်တဲ့ရှမ်းရိုးမ` ခွေကို ရန်ကုန်က တေးသံသွင်းတွေ လက်မခံခဲ့ဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နိုင်ငံခြား သံစဉ်နဲ့ မြန်မာစာသား ကိုတောင် မြန်မာပရိသတ်က လက်မခံ နိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာ စိုင်းခမ်းလိတ်တို့က ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်နဲ့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားက မြန်မာလို ဆိုထားတယ်ဆိုတော့ ဘယ် လက်ခံ နိုင်ဦးမှာလဲ။ အဲဒီခွေကို တောင်ကြီး မှာပဲ စတင်ဖြန့်ခဲ့တယ်။
နောက်ပိုင်း အဆိုတော်များကတော့ စိုင်းထီးဆိုင်၊ စိုင်းခမ်းသီ၊ စိုင်းခမ်းမတ်၊ စောသိမ်းဝင်း၊ စိုင်းဆေးနော်၊ ဆွန်ကျဲအိုတို့ ပူးပေါင်းပြီး စီးရီးတွေ ထုတ်လာ ခဲ့ကြတယ်။ ပရိသတ်တွေလည်း အတော့်ကို လက်ခံလာခဲ့တယ်။ သို့သော် ဘယ်သူ့ကို ပိုမို လက်ခံသလဲ ဆိုတာ မသဲကွဲသေး ပါဘူး။ အဲ . . မန္တလေးရောက် ရှမ်းတစ်ယောက် စီးရီးခွေကတော့ ပေါက်ခွေလို့ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ ကက်ဆက် လည်း ပေါလာတယ်။ နားထောင်သူတွေလည်း မြန်မာပြည် တစ်ပြည်လုံး မန္တလေးရောက် ရှမ်း တစ်ယောက် မဖွင့်တဲ့နေရာ မရှိသလောက် ဖြစ်သွားတယ်။
အဆိုတော်တွေဟာ နောက်ပိုင်းမှာ မိမိကိုယ်တိုင် စီးရီးတစ်ခွေ ထုတ်ချင်ကြ တတ်တယ်။ ဒါကြောင့် စိုင်းခမ်းသီလည်း တစ်ခွေ သီးသန့် ထုတ်ကြည့်တယ်။ စောသိမ်းဝင်းလည်း ထို့အတူပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အခွေက မပြန့်ခဲ့ဘူး။ စိုင်းထီးဆိုင် ထုတ်တဲ့အခွေ တွေကျတော့ ပရိသတ်က လက်ခံကြတယ်။ ဒါကြောင့် စိုင်းခမ်းလိတ်ရေးတဲ့ သီချင်းတွေဟာ စိုင်းထီးဆိုင်ဆိုဖို့ အတွက် ဖြစ်လာတော့တယ်။ စိုင်းထီးဆိုင်လည်း အနုပညာပါရမီ ထူးသူ ဖြစ်ကြောင်း စိုင်းခမ်းလိတ်က အဲဒီလို ပြောဖူးတယ်။
“စိုင်းထီးဆိုင်ကတော့ သူ့ကို ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်တွေ သင်ပေး လိုက်တာနဲ့ သူချက်ချင်း သဘောပေါက်လွယ်တယ်။ ပြောပြတဲ့အတိုင်း သူ လိုက်ဆိုနိုင်တဲ့ အနုပညာပါရမီရှင် တစ်ဦးပါ“
သီချင်းရေးတဲ့ သူက သီချင်းတွေ ဘယ်လို အရေးကောင်းပေမယ့် ဆိုတဲ့သူ မကောင်းဘူး ဆိုရင် အဲဒီ သီချင်းက ကောင်းတဲ့ သီချင်း ဖြစ်မလာနိုင်ဘူး။ စိုင်းခမ်းလိတ် ရေးတဲ့ သီချင်းတွေ စိုင်းထီးဆိုင် မဆိုခင်က တခြား အဆိုတော်တွေ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ သီချင်းတွေ မပေါက်ခဲ့ကြဘူး။ အဲဒီသီချင်းတွေ စိုင်းထီးဆိုင် ပြန်ဆိုမှပဲ သီချင်းကောင်းတွေ ဖြစ်သွား ကြကုန်တော့တယ်။ စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ အသံဟာ စိုင်းခမ်းလိတ်ရေးတဲ့ သီချင်းနဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံး လို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်တယ်။ ၁၉၇၃ ကစပြီး စိုင်းထီးဆိုင်ရဲ့ စီးရီးတွေ ဆက်တိုက် ထွက်လာတော့ သလို တေးရေးဆရာ စိုင်းခမ်းလိတ်ရဲ့ နာမည်လည်း တဟုန်ထိုး တက်လာတော့တာပါပဲ။
ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်ရဲ့ သီချင်းကောင်းတွေ၊ စာသား လှလှတွေ ပေါ်ထွက်လာဖို့ အဓိက အိပ်မက်လှလှ ပေးတဲ့သူ ကတော့ နွဲ့နွဲ့တင်ပဲဖြစ်တယ်။ ဗမာသီချင်း အပုဒ် ၆၀၀ ကျော် ထဲမှာ နွဲ့နွဲ့တင်ကို ပတ်သက်တဲ့ အချစ်အကြောင်းတွေ အများကြီး တွေ့ရပါတယ်။ အထင်ရှား ဆုံးကတော့ “ သိပ်သိပ်ချစ်ရတဲ့ နွဲ့တင်“ နဲ့ “ ဒို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်“ ပဲဖြစ်တယ်။ အဲဒါက လူရည်ချွန်ကို ရအောင်ယူမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က စခဲ့တာ။
သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဇာတ်လမ်း ကတော့ ရှစ်တန်းကျောင်းသား ဘဝက စခဲ့တယ်။ ကိုးတန်း ရောက်တော့ အတူတူ လူရည်ချွန် ဖြစ်ပြီး ဒေသန္တရ ဗဟုသုတ အတူတူ သွားခဲ့ရလို့ ပိုမို ရင်းနီးခဲ့တယ်။ ဆယ်တန်း ရောက်တော့ စိုင်းခမ်းလိတ်က နမ္မတူကို ပြန်သွား ရတယ်။ သို့သော် ဆေးတက္ကသိုလ် တက်တော့ မန်းမြေမှာ ပြန်ဆုံခဲ့ ကြတယ်။ ဆရာတူ တပည့်ဘဝနဲ့ အတူ ကျောင်းနေဘက်မှာ ခင်ခဲ့ကြတဲ့ ခင်မင်မှုဟာ အခြား ကျောင်းသားတွေ အကြားကို ရောက်သွား ရင် ပိုမိုပြီး အလေးအနက် ရှိလာ တတ်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် စိုင်းခမ်းလိတ်နဲ့ နွဲ့နွဲ့တင်တို့ရဲ့ ခင်မင်မှု ဟာလည်း ရင်းနီးမှုကို ပိုပြီးတော့ ဖြစ်စေခဲ့တယ်။
ကျောင်းသားဘဝဆိုတာလဲ မူလတန်း၊ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း တုံးက ဆရာ ဆရာမတွေရဲ့ အစစအရာရာ ထိမ်းသိမ်းမှုအောက်မှာ နေကြရတယ်။ တက္ကသိုလ် ရောက်လာတဲ့ အခါကျတော့ သိတတ်တဲ့ အရွယ်ဖြစ်ပြီလို့ သဘောထားတဲ့ အတွက် ဆရာဆရာမတွေ မျက်စိ ဒေါက်ထောက် ကြည့်ရှုမှု မရှိတော့လို့ တချို့ ကျောင်းသားတွေ အောက်ခြေလွတ်ပြီး တက္ကသိုလ်က ပျော်ဖို့ကောင်းလိုက်တာလို့ ဆိုကြတယ်။ အမှန်မှာတော့ တက္ကသိုလ်ဆိုတာ စာတွေလည်း များလာတယ်။ အဆင့် မြင့်လာတယ်။ ပေါ့ပေ့ါရော့ရော့နေ ပျော်ချင်သလိုပျော် နေတဲ့သူတွေ အတွက် ပျက်စီးတတ်ကြတယ်။ များသောအားဖြင့် ယောကျာ်းလေးတွေပါ။
စိုင်းခမ်းလိတ်လည်း ယောက်ျားသား ပေမို့ ပျော်တတ်ပါတယ်။ သို့သော် မိမိရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကိုတော့ အပျက်မခံ ခဲ့ပါဘူး။ သူကျောင်းပျက်လို့ အတန်း မတက်ခဲ့ရင် သူ့ကို ကူညီ ပေးခဲ့တဲ့သူက နွဲ့နွဲ့တင်ပဲဖြစ်တယ်။ သူ့ရဲ့ မှတ်စုစာအုပ်တွေဟာ များသော အားဖြင့် နွဲ့နွဲ့တင်ရဲ့ လက်ရေးတွေသာ များပါတယ်။
လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ချစ်ခင်ရင်းနီးဖို့ ဆိုတာ (၁) ရှေးဘဝတုံးက မေတ္တာရေစက်ရ ရှိခဲ့ကြတယ်။ (၂) ဒီဘဝမှာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ကူညီဖေးမခဲ့ကြတယ်။ ဒီအကြောင်း နှစ်ခုကြောင့် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ချစ်ကြိုက်သွားကြတာပဲ။ သူတို့ နှစ်ယောက်ကတော့ နှစ်ခုစလုံးကြောင့် ထင်တယ်။ စိုင်းခမ်းလိတ်လည်း လူရည်ချွန်ကို ရအောင်ယူမယ် ဆိုတဲ့ သူ့ ရည်ရွယ်ချက် အတိုင်း ၁၉၇၃ ခုနှစ်မှာ လူရည်ချွန်သုံးထပ်ကွမ်း ဖြစ်တဲ့ နွဲ့နွဲ့တင်နဲ့ လက်ထပ် လိုက်ကြတယ်။
သူတို့နှစ်ယောက် ညားသွားကြ တာကို တချို့ အမျိုးမျိုး ဝေဖန်ကြ လေကန်ကြတယ်။ အများဆုံး အမေးခံရတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခု ကတော့ စိုင်းခမ်းလိတ် ဘာကြောင့် ရှမ်းမကို မယူသလဲ တဲ့။ သူ ကိုယ်တိုင်လည်း ရှမ်းမလေးများကို ကြိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီတုံးက ရှမ်းမတွေက သူ့ကို လက်မခံခဲ့ဘူး။ သူကိုယ်တိုင် ကလည်း အမြဲတမ်း ရှမ်းဘောင်းဘီ ဝတ်ပြီး တက္ကသိုလ် တက်ခဲ့တာကို တချို့ပျိုမေတွေက (တိုက်ဂေါ = တောဂိုက်) လို့တောင် ဆိုသေးတယ်။ တချို့လည်း ရှမ်းမျိုးချစ်ရူးလို့တောင် ဆိုသေးတယ်။ စိုင်းခမ်းလိတ်ရဲ့ သဘော ကတော့ အပေးအယူ သီချင်းထဲကလို မင်းလာမယ်ဆိုရင် ကိုယ်ခင်းပေးပါ့မယ် ဒါပေမယ့် ဒီလမ်းကို မင်းထာဝရ လျှောက်ရမယ် . . . ပါ။ ဒါကြောင့် နောက်ဆုံး ခင်းပေးတဲ့ လမ်းပေါ် ထာဝရလျှောက် မယ့် နွဲ့နွဲ့တင်ကိုပဲ လက်ထပ်ခဲ့ပါတော့တယ်။
အိမ်ထောင်ပြုဖို့အတွက် စိုင်းခမ်းလိတ်တစ်ယောက် အတွေးတွေ များစွာနဲ့ မိုးလင်း ခဲ့ပေါင်း မနဲတော့ပါ။ နွဲ့နွဲ့တင်နဲ့ အိမ်ထောင်ပြုတဲ့ကိစ္စကို သူ့ရဲ့ သီချင်းဖြစ်တဲ့ `ဒို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်“သီချင်းကို ခံစားကြည့်ရင် နားလည်ကြမှာပါ။ သူနဲ့ မဆုံဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရှမ်းမင်းသမီးများ အတွက်လည်း ရှမ်းသီချင်းအချို့ စိုင်းခမ်းလိတ်ရေးထားတာ ရှိပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်အချို့ကတော့ “ တစ်ညလုံး နိုးခဲ့သော်လည်း အိပ်ယာက မထဘဲနဲ့ မိုးလင်းတဲ့အခါ ငါ့ကို မှတ်မိရင်လည်း မခေါ်နဲ့တော့“ တဲ့။
နောက်တစ်ပုဒ်ကတော့ `လွယ်ဆမ်ဆစ်` သီချင်း ပါ။ အိမ်ထောင်ပြုပြီဆိုရင် အမျိုးသားက အိမ်ထောင်ဦးစီး တာဝန်ကို ဦးလည်မသုန် ထမ်းရွက် ရ မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတာဝန်ကို ကျေပြွန်အောင် ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ် ထမ်းဆောင်ခဲ့လို့ သူရေးတဲ့ `ဒီတောင်ကို မောင်ဖြိုပါ့မယ်` ဆိုတဲ့ သီချင်းက ပေါ်လွင်စေခဲ့တယ်။
နောက်ပြီးတော့ သူများရဲ့ သမီးပျိုကို လက်ထပ်ယူပြီး မိမိရဲ့ ကြင်ယာအပေါ် ကတိ သစ္စာ မရှိခဲ့ရင်၊ အိမ်ထောင်ရေးတာဝန် မကျေပြွန်ခဲ့ရင် `အလကားလူ` ဆိုပြီး အများရဲ့ ကဲ့ရဲ့မှုကို ခံရမယ်။ ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်လဲ သူ့အချစ်ဟာ သူများထက် မလျှော့ကြောင်း `မန္တလေးရောက် ရှမ်းတစ်ယောက်`သီချင်းက `မန်းပျိုဖြူတစ်ယောက်ကို ရှမ်းချစ်လည်း ဗမာထက် မလျှော့တာ တကယ်တမ်းပြခဲ့တယ်` လို့ ဆိုထားတယ်လေ။
ဒါကတော့ ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်ရဲ့ ဖြစ်စဉ် တချို့ကို ဖေါ်ပြခြင်းပါ။ လူတိုင်း လူတိုင်းဟာ မိမိတို့ရဲ့ အမျိုးအနွယ်ကို စောင့်ရှောက် ရမည့် တာဝန်ရှိပါတယ်။ ရှမ်းလူငယ်များ လူမျိုးခြားတွေနဲ့ အိမ်ထောင်ပြုသွားတာကို ရှေးရေစက်မို့လို့ ဆိုရမလား။ ဒါပေမယ့် အမျိုးအနွယ်ကို စောင့်ရှောက်ဖို့တော့ ဆရာကြီး ဦးစိုင်းအောင်ထွန်းရဲ့ စကားနဲ့ လက်ဆောင်ပါးပါရစေ။
“ငါတို့ ရှမ်းတွေဟာ တောတောင် သျှိုမြှောင် သစ်ပင်တွေအကြား၊ လယ်တော ယာတောတွေ အကြား အမျိုးအနွယ်ကို စောင့်ရှောက်ရင်း နေထိုင် လာခဲ့ကြတာ နှစ်ပေါင်း ၄၀၀၀ ကျော်ခဲ့ သော်လည်း ငါတို့ အမျိုးအနွယ် မပျောက်ပျက်ခဲ့ဘူး။ ယနေ့တိုင် တည်ရှိနေတယ်။ ဒါပေမယ့် နောင်အနာဂတ်မှာ တောတောင်သစ်ပင်တွေ လယ်ယာတွေ ပျောက်ပျက်ကုန်ပြီး ငါတို့တတွေ လူမျိုးခြားတွေရဲ့ အကြားမှာ နေထိုင်သွားကြရမယ်။ ဒါကြောင့် လူမျိုးခြား အကြားမှာ နေရမယ့်အချိန် ငါတို့ အမျိုးအနွယ် မပျောက်ပျက်အောင် ဘယ်လို နေထိုင်သွားရမှာလဲ။ အမျိုးဘာသာ သာသနာ မပျောက်ပျက်အောင် နည်းလမ်းသစ် ရှာရမှာပဲ“ တဲ့။
ရှမ်းပညာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ စကားလည်း မှတ်သားစရာ ကောင်းပါတယ်။ အဲဒါက တော့ “ရှမ်းသားသမီးတိုင်း ရှမ်းမိခင်ဖခင် ဖြစ်အောင် ကြိုးစားရမယ်၊ ရှမ်းဖိုးဖိုး ရှမ်းဖွားဖွား ဖြစ်အောင် ကြိုးစားရမယ်“ တဲ့ ဒီစကား ကတော့ မိမိတို့ရဲ့ သားမြေးတွေ ရှမ်းဖြစ်ရင် မိမိတို့ လည်း ရှမ်းဖေဖေ ရှမ်းမေမေ ရှမ်းဖိုးဖိုး ရှမ်းဖွားဖွားဖြစ်သွားမှာပါ။
လူဆိုတာ လောကဓံ အကောင်းအဆိုးကို မလွတ်နိုင်ပါ။
ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်လည်း လောကဓံ အမျိုးမျိုးကို ခံရသော်လည်း သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက် ဦးတည်ချက်ကိုတော့ မပြောင်းလဲ စေခဲ့ပါဘူး။ သူရေးသားခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေထဲမှာ သဘာဝတရား နိယာမတရားတွေကို ပီပြင်စွာ ဖေါ်ညွှန်းတဲ့ အတွက်ကြောင့် လူအများ လက်ခံ လာကြတယ်။ နောက်တစ်ချက်ကတော့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် ဖြစ်လို့ ပိုပြီး တန်ဖိုး ထားကြတယ်။
လူဆိုတာက ချီးမွမ်းခြင်း ကဲ့ရဲ့ခြင်း အကြား ကနေ အသက်ရှင် ကြီးပြင်း လာခဲ့ခြင်းပါ။ တေးရေးဆရာ ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်လည်း မလွှတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ သူရေးခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေ ထဲမှာ အတွေးအခေါ်တွေ ကောင်းမွန်ပြီး သံစဉ်စာသားတွေ လေးနက် နုညက်ပေမယ့် ကဲ့ရဲ့ အပြစ်ရှာတဲ့ သူတွေလည်း မရှားပါဘူး။ ရှမ်းစကားပုံတစ်ခုကတော့ “ အကဲ့ရဲ့လွတ်ရင် မိုးကြိုး ပစ်တတ်တယ်တဲ့“ ဒါကြောင့် ကဲ့ရဲ့တဲ့ သူကြောင့် ဒို့တတွေ မိုးကြိုး အပစ်မခံရလို့ သူတို့ ကိုတောင် ကျေးဇူးတင်ရမလို ဖြစ်နေတယ်။
စိုင်းခမ်းလိတ်ရဲ့ အဝေဖန်ခံရဆုံး သီချင်းစာသားတစ်ပိုဒ်ကတော့ “ မောတော့ မောတာပေါ့ ဒါပေမယ့် မမောဘူး“ဆိုတဲ့ဟာပါ။ (အကျယ်ကို ရှမ်းအနုပညာရှင် ထူးချွန်ဆုရ စိုင်းထီးဆိုင် အကြောင်းမှာ ဖတ်ရှုပါရန်)
ကိုယ်တို့ချစ်တဲ့ဘီး၊ ဘီးနံပါတ် OK 0122L စတဲ့ စက်ဘီးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သီချင်းတွေ ကတော့ ကာတွန်း တစ်ခုကို စာရေးသူ ဖတ်မိတယ်။ သူခိုးတစ်ယောက် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်က ဖွင့်တဲ့ သီချင်းကို နားထောင်မိပြီး စိတ်ညစ် နေတဲ့ပုံပါ။ သူခိုး နားပိတ်ပြီး ညီးညူ နေတာကတော့ “သီချင်းရေးဆရာရဲ့စက်ဘီးကို မသိလို့ ခိုးမိခဲ့တာပါ. . . အခုတော သီချင်းနဲ့ လူကိုနှိပ်စက် နေပါလား“ တဲ့။
၁၉၇၉ တုံးက ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်က မေမြို့ဆေးရုံမှာ တာဝန်ကျခဲ့တယ်။ ၁၉၈၃ ခုမှာတော့ ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ် ရန်ကုန် မင်္ဂလာဒုံ ဆေးတက္ကသိုလ် ၂ မှာ M.Med.Sc (Anatomy) တက်ခဲ့ပြီး ၁၉၈၉ မှာ M.Med.Sc (Anatomy) ဘွဲ့ကို ရခဲ့ပြန်တယ်။
၁၉၉၁ ခု မန္တလေးတက္ကသိုလ်များ ရှမ်းစာပေယဉ်ကျေးမှု ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင် ရတယ်။ သူတို့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားခေတ် အတွင်း နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ ရှမ်းစာပေ အသုံးလုံးကို ရှမ်းရွာတွေမှာ သွားသင်ကြားပို့ချပေးခဲ့တယ်။ ရှမ်းစာပေ မူသစ် သန္ဓေတည်ခဲ့တာ ကတော့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း ဆရာတော် ဦးဝိဇယနန္ဒ၊ စဝ်ဆိုင်မိန်း (ကျိုင်းတုံ) တို့က စတင် မျိုးစေ့ချခဲ့တာပါ။ ဆရာကြီး ဦးစိုင်းအောင်ထွန်း လက်ထက်မှာတော့ အဲဒီရှမ်းစာပေ မျိုးကို စတင်ပွားပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမယ်။ အဲဒီနောက် ဦးစိုင်းဖက ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ ပျဉ်းမနား၊ မြစ်ကြီးနား၊ လားရှိုး၊ တောင်ကြီး စတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများကို ဦးဆောင်ပြီး ရှမ်းခေတ်သစ်စာပေ များကို နေရာအနှံ့ သင်ကြား ပို့ချခဲ့တယ်။
ရှမ်းစာပေသင်တန်းမှာ သီဆိုဖို့ စာပေဆိုင်ရာသီချင်းများကိုလည်း ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်က ရေးသားပေးခဲ့ပြီး သင်တန်းဆရာများ ကျောင်းသားများ အတွက် ပျော်ရွင်မှုကိုဖြစ် စေတဲ့အပြင် အားဆေး တစ်ခွက်ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ရှမ်းစာပေ သင်တန်းကျောင်းလည်း မရှိသလို၊ ရှမ်းဆရာဆရာမ အတွက်လည်း လခ ဆိုတာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အားလပ်တဲ့ နွေရာသီမှာ ရက်တို သင်တန်းပဲ ဖွင့်နိုင်ခဲ့တယ်။ စာသင်တဲ့ အချိန်ကလည်း ရွာသားတွေ အဖို့ နေ့လည်ပိုင်း မအားတဲ့ အတွက် ညပိုင်းမှသာ သင်တန်း ဖွင့်ခဲ့ရတယ်။
ဒါကြောင့် စိုင်းခမ်းလိတ် ရဲ့ ရှမ်းသီချင်းတစ်ပုဒ်က အဲဒီလို ဆိုထားတယ်။ ညအချိန်ဟာ အိပ်ဖို့ပဲလား. . . တဲ့။ ဆိုလိုတာ က ညဆိုတာ အိပ်ဖို့သက်သက် မဟုတ်ဘဲ မိမိတို့ရဲ့ စာပေများကို လေ့လာ သင်ယူရမယ်။ မိသားစု အလိုက် သင်ပေး သွားရင်လည်း လွယ်ကူစွာနဲ့ ရေးတတ်ဖတ်တတ် သွားကြမှာပါ။ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ နယ်ဆင်းပြီး ရှမ်းစာ သင်ကြားမှု လျှော့ပါး လာတဲ့အချိန် သံဃာတော်များက ရှမ်းဗုဒ္ဓဘာသာ ယဉ်ကျေးမှုကို နှစ်စဉ် ပို့ချလျှက်ပါ။
၁၉၉၀ မှာတော့ ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်ဟာ မန္တလေးဆေးတက္ကသိုလ် ခန္ဓာဗေဒမှာ ကထိက အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်တယ်။ အရင်တုံးက ကျောင်းသား ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ယခုတော့ ဆရာအဖြစ် တက္ကသိုလ်ကို ပြန်ရောက်လာခြင်းပါ။ ၁၉၉၂ ခု ၄၂ (စိန်ကျော်ကွေ့) လမ်းမှာရှိတဲ့ အိမ်ဟောင်းက နေ ၆၉ လမ်း ၄၁/၄၂ လမ်းကြားရှိ မိုင်ဆုံဂေဟာကို ပြောင်းရွှေ့လာတော့တယ်။
၁၉၉၃ ခု မန္တလေး တက္ကသိုလ်များ ရှမ်းစာပေယဉ်ကျေးမှု ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ကို မယူတော့ဘဲ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတာဝန်ကိုတော့ ဆက်လက်ယူနေခဲ့တယ်။ ၁၉၉၅ ခုတော့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကြောင့် (ခါးရိုးနာ) ကထိက တာဝန်ကို အနားယူ လိုက်တယ်။ ၁၉၉၅ ခုမှာတော့ မြန်မာပြည် တက္ကသိုလ် ရှမ်းစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ပေးခြင်းခံရ တယ်။
အရှင်ဓမ္မသာမိ (ကေလဏီယျတက္ကသိုလ်၊ ကိုလံဘို၊ သီရိလင်္ကာ)နဲ့ အရှင်သုခမိန္ဒ (နိုင်ငံတော်ပရိယတ္တိသာသနာ့တက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်) တို့ကိုလည်း နာယက အဖြစ် ရွေးချယ်ထား တာကိုလည်း တွေ့ရတယ်။ ၁၉၉၅ ခု ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ် ဦးဆောင်ပြီး တက္ကသိုလ်လူငယ်များ ကျန်းမာရွှင်လန်းစေဖို့၊ ခင်မင် ရင်းနီးစေဖို့ အတွက် မန္တလေးနဲ့ တောင်ကြီး ရှမ်းလူငယ် ဘောလုံး အသင်းကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပြီး ပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပပေးခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ အင်းလေးဖောင် တော်ဦး ဘုရားဖူးရင်း ဝက်သားကင်ကျောင်းကို ရောက်သွားတဲ့ အချိန် ဘုရားရှိခိုး ဆိုင်ရာ သီချင်းရေးဖို့ အတွေးသစ် တစ်ခုရလာခဲ့ကာ ၁၉၉၇ ခုတွင် စီးရီး တစ်ခွေစာ အဖြစ် အကောင်အထည် ဖေါ်နိုင်ခဲ့တယ်။ စီးရီးခေါင်းစဉ်ကတော့ “ ဘုရားတရားသံဃာနဲ့ ဗုဒ္ဓဝင်အကျဉ်း“ ဖြစ်ပြီး နန်းခမ်းနွဲ့လိတ် ဆိုထားတာပါ။
၁၉၉၈ ခု သမီးဖြစ်သူ နန်းခမ်းဥလိတ်က ပြင်ဦးလွင် အထက (၂) (ယခင် စိန်အဲဘတ်) မှာ ဂုဏ်ထူး (၄) ဘာသာနဲ့ အောင်မြင် ခဲ့တဲ့ အတွက် ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ် အဲဒီ ပညာရည်ချွန် ဆုပေးပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့တယ်။ သူ့သမီး အတွက် Let Your Light Shine သီချင်းရေးစပ် ပေးပြီး စိုင်းဆိုင်စွမ်ဖက ကီးဘုတ်တီး၊ နန်းခမ်းနွဲ့လိတ်နဲ့ နန်းခမ်းဥလိတ်တို့က အဲဒီဂုဏ်ပြုပွဲ မှာ သီဆိုခဲ့ကြတယ်။
၁၉၉၉ ဧပြီလ ၂၇ ရက်နေ့မှာ ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်ရဲ့ နှစ် (၅၀) ပြည့် ရွှေရတု မွေးနေ့ပွဲကို မန္တလေး တက္ကသိုလ်များ ရှမ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့က ဦးဆောင်ပြီး မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာ ကျင်းပပေးခဲ့တယ်။ ည ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ ကိုတော့ မန္တလေး ရှမ်းလူငယ်မောင်မယ်များက ရှမ်းသာရေးနာရေးအသင်းမှာ ကျင်းပပေးသွားခဲ့တယ်။
တစ်ကမ္ဘာလုံး ခရစ် ၂၀၀၀ ပြည့်ကို ကြိုဆိုတဲ့ အချိန် တေးရေးဆရာ ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်က ရှမ်း၊ မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ် ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို ရေးစပ်ပြီး ကြိုဆိုခဲ့သေးတယ်။ အဲဒါကတော့
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှာ ဒေါက်တာ နွဲ့နွဲ့တင်က ကျိုင်းတုံဆေးရုံမှာ တာဝန်ကျလို့ စိုင်းခမ်း လိတ်လည်း ကျိုင်းတုံကို အတူ လိုက်သွား ခဲ့တယ်။ သီချင်းရေးဆရာ ကတော့ ဘယ်မှာ ရောက်ရောက် ဘာကို တွေ့တွေ့ ခံစားချက်နဲ့အညီ တေးတွေ စီဖြစ်သွားတတ်ကြတာပဲ။ ကျိုင်းတုံ မှာတော့ (ကျိုင်းတုံစံအိမ်) ဆိုတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ် ရေးဖြစ်ခဲ့ သေးတယ်လို့ဆိုတယ်။ အဲဒီနှစ်မှာ ဒေါက်တာဓမ္မသာမိနဲ့ ကျိုင်းတုံမှာ ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးရဲ့ စကား မှတ်တမ်း တချို့က ဒီလိုပါ
(လိတ်) အခုလို အရှင်ဘုရားတို့ နိုင်ငံခြားမှာ စာတွေအောင်လာတာ တွေ့ရတော့ တပည့်တော် ဝမ်းသာ ဂုဏ်ယူပါတယ်ဘုရား။
(အရှင်) အခုလို ဘုန်းဘုန်းတို့ အောင်မြင်လာခဲ့တာကလည်း ဒကာကြီးတို့ အင်္ဂလိပ်စာ တတ်တာကို အားကျလို့ ကြိုးစားပြီး အဲလိုဖြစ်လာတာပါ . . . တဲ့။
၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာ ရန်ကုန် ရှမ်းစာပေ ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့က ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်အား ရှမ်းစာပေထူးချွန်ဆုကို ချီးမြှင့်ခဲ့တယ်။ ကိုးမိုင်ရှမ်းကျောင်းမှာ ကျင်းပတဲ့ ၂၀၉၅ ရှမ်း နှစ်သစ်ကူး အချိန်မှာ ချီးမြှင့်ခဲ့တာပါ။
၂၀၀၃ ခု သား စိုင်းခမ်းစိုးလိတ်က ဆယ်တန်းကို ဂုဏ်ထူး ခြောက်ဘာသာနဲ့ အောင်ပြီး မန္တလေးတိုင်းမှာ နံပါတ်တစ်၊ မြန်မာတစ်ပြည်လုံးမှာ ဒုတိယ ရလို့ ရန်ကုန်၊ ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာနက ကျင်းပတဲ့ ဂုဏ်ပြုပွဲကို ဖခင်ဖြစ်သူ ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ် သွားတက်ရောက်ခဲ့တယ်။
၂၀၀၄ ခု မန္တလေး ရှမ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု နာယကဖြစ်ပြီး ယခုတိုင် တာဝန်ယူ လျက်ပါ။ ၂၀၀၇ ခု မန္တလေး ဂီတအစည်းအရုံးမှာ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ခန့်အပ်ခြင်းခံရတယ်။ ယခုတိုင် အဲဒီတာဝန်ကို ယူနေဆဲပါ။ ဒီ ၂၀၀၇ မှာပဲ ဒေါက်တာဓမ္မသာမိ ဖိတ်လို့ လန်ဒန်ကို ရောက်သွားပြီး ရှမ်းယဉ်ကျေးမှု နှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှာ စာတမ်းဖတ်ခဲ့တယ်။ အဆိုတော်စိုင်းထီးဆိုသ်၊ နန်းခမ်းနွဲ့လိတ်၊ ဒေါက်တာစိုင်းစံအိုက်တို့လဲ လိုက်ပါ သွားကြတယ်။ ရှမ်းနှစ်သစ်ကူး ကိုလဲ အဲဒီမှာပဲ ဆင်နွဲခဲ့တယ်။
၂၀၀၈ ခု မေလ ၁၇ ရက် ပင်လုံမြို့၊ ပိဋကတ်ရှမ်းဘာသာပြန်အဖွဲ့ချုပ်၊ ပရိယတ္တိ သဒ္ဓမ္မပါလစာပွဲတော် နှစ် (၅၀) ပြည့် ရွှေရတုသဘင်မှာ ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်အား တေးရေးဆရာ ရှမ်းအနုပညာရှင် ထူးချွန်ဆုကို ချီးမြှင့်ခဲ့တယ်။ ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်၊ တံဆိပ်နဲ့ ကျပ်ငွေ ဆယ်သိန်းပါ။ ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ် ယခုလို ရှမ်းအနုပညာရှင် ထူးချွန်ဆု ရတာကို မြင်တွေ့ရလို့ ပရိသတ်တွေ အားလုံး ဝမ်းသာ မဆုံး ဖြစ်ကြရတယ်။ အမျိုး ဘာသာ သာသနာ အတွက် နှစ်ရှည်လများ မနေမနား ကြိုးစားလာလို့ ဒီဆုကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရရှိတဲ့အတွက် ဆုယူချိန်မှာ လက်ခုပ်သံတွေဟာ မိုးထက်ညံသွားပါတော့တယ်။
ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်ကိုယ်တိုင် ပင်လုံပရိယတ္တိသဒ္ဓမ္မပါလ နှစ် (၅၀) ရွှေရတုသဘင်ကို လာတွေ့ရတော့ များစွာ စိတ်စွမ်းအားတွေ တက်လာခဲ့ ပြန်တယ်။ မိမိရဲ့ နောက်မှာ ပရိ သတ်တွေ အများကြီးရှိလို့ ပိုမို အားရှိလာကြောင်းပါ။ အဲဒီပွဲတုံးက ဇနီးဒေါက်တာဒေါ်နွဲ့နွဲ့တင်၊ သမီးနန်းခမ်းနွဲ့လိတ်တို့လည်း လိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ ရွှေရတုပွဲတော် အတွင်း ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်က ဘာသာရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ခေတ်ရှမ်းသီချင်း တစ်ပုဒ်ကိုလည်း ရေးဖွဲ့သွားနိုင်ခဲ့တယ်။ (စွမ်းလန်စောဝ်ဖရား= ဘုရားရှင်ရဲ့ နောက်ကိုလိုက်မယ်) တဲ့။
မျိုးဆက်သစ် ရှမ်းအနုပညာရှင်များလည်း ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်ကို ကြိုဆိုဂါရဝ ပြုကြတာ တွေ့ရတယ်။ အားလုံးဟာ အနုပညာအင်အားတွေ ပိုမို လန်းဆန်း အားပြည့်လာ သလို ခံစားနေကြရတယ်။ အနုပညာသမား ဆိုတာ အားပေးသူရှိလေ အားပြည့်လေ မဟုတ်လား။
စိုင်းထီးဆိုင်၊ စိုင်းဆိုင်မောဝ်၊ ဆခဟ၊ စိုင်းဆိုင်စွမ်ဖ၊ စိုင်းအောင်ထီးခမ်း၊ စိုင်းဆိုင်စွမ်မောဝ်၊ စိုင်းအိုက်ဆွန်၊ စိုင်းဖောင်း(န်)မောဝ်၊ နန်းမွေနွမ်ဖောင်၊ နန်းခမ်းနွဲ့လိတ်၊ ပုစွန်၊ နန်းခမ်းခင်၊ နန်းခမ်းနောင့်၊ နန်းဆာရာ။
စိုင်းထီးဆိုင်၊ စိုင်းခမ်းသီ၊ စိုင်းဆိုင်မောဝ်၊ စောသိမ်းဝင်း၊ စိုင်းဆေးနော်၊ ခင်မောင်တိုး၊ ကျော်ဟိန်း၊ ဆက်မော်၊ စိုးသူ၊ ရင်ဂို၊ မျိုးကျော့မြိုင်၊ ဆောင်းဦးလှိုင်၊ အဲလက်စ်၊ စည်သူလွှင်၊ ဘိုဖြူ၊ အက်စစ်၊ မောင်မောင်ဇော်လတ်၊ ဟန်ထူးလွင်၊ ကိုင်ဇာတင်မုန်း၊ မေဆွိ၊ အယ်လ်ခွန်းရီ၊ ကေဇင်လတ်၊ မီမီဝင်းဖေ၊ နန်းခမ်းနွဲ့လိတ်၊ ရတနာဦး၊ ဆုန်သင်းပါရ်၊ နွေညီအစ်မများ။
အခု ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်ဟာ မန္တလေး၊ မိုင်ဆုံဂေဟာမှာ ဇနီးသားသမီးတို့နဲ့ အတူ နေထိုင်ပြီး ဝါသနာအရ သီချင်းတွေ ရေးနေဆဲပါ။ ဇနီးဒေါက်တာဒေါ်နွဲ့နွဲ့တင်ကတော့ ကလေး အထူးကုဆေးရုံမှာ တာဝန်ထမ်းလာခဲ့ပြီး ဒီ ၂၀၁၀ မှာတော့ ပင်စင်ယူပြီး အပြင် ဆေး ခန်းမှာပဲ အလုပ်လုပ်တော့တယ်။
သမီးကြီး နန်းခမ်းနွဲ့လိတ်ကတော့ B.E (Civil) ဘွဲ့ယူပြီး ၂၀၀၉ ခုအတွင်း လန်ဒန်မှာ ကျောင်းသွားတက်ကာ မောင်ဆန်းညွှန့်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျခဲ့တယ်။ နန်းခမ်းအုလိတ်ကတော့ M.B.B.S ဘွဲ့ရ၊ နန်းခမ်းဟန်လိတ်ကတော့ B.A (English) ဘွဲ့ရကာ ကိုကိုမောင်နဲ့ အိမ်ထောင်ကျကာ ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်အတွက် မြေးနှစ်ယောက်ရစေသူပါ။ သားငယ် စိုင်းခမ်းစိုးလိတ်ကလည်း M.B.B.S ပါ။ သားသမီးများ အားလုံးကို ဘွဲ့ရဖြစ်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ဖခင်ကောင်း ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်နဲ့ မိခင်ကောင်း ဒေါက်တာနွဲ့နွဲ့တင် ကတော့ သားသမီးအတွက် ပညာအမွေ ပေးခဲ့လေပြီ။
ရှမ်းအနုပညာရှင် ထူးချွန်ဆုရ ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလိတ်တစ်ယောက် ဇနီး သားသမီး မြေးမြစ်တွေနဲ့ အတူ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ၊ အမျိုးဘာသာ သာသနာအတွက် တေးသီချင်းများ ဆက်လက် ရေးသား နိုင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်တောင်းအပ်ပါတယ်။
(၁) စိုင်းအောင်မိန်း (မိုတိုင်း)ရေးတဲ့ “ရှမ်းအနုပညာရှင်ထူးချွန်ဆုရ ဒေါက်တာ စိုင်းခမ်းလိတ်၏ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်း“ ကို မှီငြမ်းသည်။
(၂) စာရေးသူ၏ ကိုယ်တွေ့။၂၀၀၉ ခု ရွှေရတုပုံရိပ် မဂ္ဂဇင်းမှ ရှမ်းစာရေးဆရာ ဟိုင်းဆေခိုင်၏ ရှမ်းစာမူကို ဆီလျှော်အောင်
White Dreams blog
ပြည်ထောင်စုနေ့နှင့် လူနည်းစုသဘောထား လေးစားရေး
The Voice Daily, 10-02-2018.
၁၃၅ မျိုးရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကပွဲများကိုကျော်၍
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်နေ့ဟာ ၇၁ နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုနေ့ဆိုတာ ကိုလိုနီအင်္ဂလိပ်လက်အောက်ကနေ မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေး ရယူနိုင်ဖို့အတွက် ဗမာအစိုးရခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ တောင်တန်းဒေသ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ စုပေါင်းပြီး ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့က ရှမ်းပြည်နယ် ပင်လုံမြို့မှာ ပင်လုံစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးရာကနေ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။
ဒါပေမဲ့ နှစ်တွေကြာလာလို့လားတော့ မသိပါ။ ပြည်ထောင်စုနေ့လို့ပြောလိုက်ရင် ပင်လုံစာချုပ်ပါ အချက်အလက်တွေ၊ လွတ်လပ်ရေးရအောင် ကြိုးပမ်းခဲ့ပုံတွေကိုမမြင်ဘဲ တိုင်းရင်းသားရိုးရာဝတ်စုံ လှလှပပတွေဝတ်ပြီး ကပြဖျော်ဖြေနေတဲ့ ပြည်ထောင်စုကပွဲ ပုံရိပ်တွေကိုသာ စာရေးသူစိတ်ထဲ ပြေးမြင်လေ့ရှိပါတယ်။ စာဖတ်သူတွေ စိတ်ထဲမှာကော ဘာကို အရင်ဆုံး ပြေးမြင်လေ့ရှိပါသလဲ။
အမြင်ဆိုတာ ကိုယ်ဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ၊ ကိုယ်မွေးဖွားခဲ့တဲ့ ဒေသရဲ့ ပထဝီ အနေအထားနဲ့ သမိုင်းနောက်ခံပေါ်မူတည်ပြီး ကွာခြားလေ့ရှိတာကြောင့် တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ထပ်တူမဖြစ်နိုင်ပါ။ ပင်လုံစာချုပ်ကိုပဲ ဥပမာကြည့်ပါ။ ဗမာလူများစုဘက်က အမြင်အရဆိုရင် တောင်တန်းသားတွေဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခေါင်းဆောင်တဲ့ ဗမာအစိုးရနဲ့ပေါင်း ပြီးပင်လုံမှာ လက်မှတ်ထိုးနိုင်ခဲ့လို့သာ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့တယ်။ နို့မို့ဆို ဗမာပြည်မပဲ လွတ်လပ်ရေးရပြီး တောင်တန်းဒေသက ကိုလိုနီဆက်ဖြစ်နေ ဦးမှာလို့ မြင်နေကြပါတယ်။ ဗမာအစ်ကိုကြီးက တိုင်းရင်းသားလူနည်းစု ညီငယ်တွေကို ကူညီကယ်တင် လိုက်တယ်ပေါ့။
ဒါပေမဲ့ တောင်တန်းသားတွေဘက်က အမြင်က အဲဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ နယ်စပ်ဒေသမှာတွေ့ဖူးတဲ့ တိုင်းရင်း သား သူပုန်ခေါင်းဆောင်တွေ၊ ပြည်တွင်းမှာတွေ့ဖူး၊ ပြောဖူးသလောက် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အမြင်အရဆိုရင် ပင်လုံစာချုပ်ကြောင့် ကိုလိုနီ အင်္ဂလိပ်ကျွန်ဘဝက လွတ်သွားတာမှန်ပေမယ့် ဗမာကျွန် (ဗမာစစ်အစိုးရကျွန်) ဆက်ဖြစ်နေ တယ်လို့ သူတို့က ဆိုကြပါတယ်။ ဒီအမြင်ကို ပြည်မနေ ဗမာအများစု သိရှိနားလည်၊ လက်ခံဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပါ့ရဲ့လား။
ရှေ့ပိုင်းမှာ နိဒါန်းချီခဲ့တဲ့အတိုင်း အမြင်ဆိုတာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး မတူနိုင်တဲ့အတွက် ပြည်မက လူများစု အမြင်နဲ့ တောင်တန်းဒေသက လူနည်းစု အမြင်မတူတာ သဘာဝကျပါတယ်။ ဒါဖြင့် သဘာဝမကျတာက ဘာလဲ။ အဲဒီလို မတူကွဲပြားမှုတွေကို အသိအမှတ်မပြုဘဲ အားလုံးအတူတူဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီး အတင်းအကျပ် ပုံစံသွင်းနေခြင်းလို့ ထင်ပါတယ်။
ဒီလို အတင်းအကျပ် ပုံစံသွင်းခြင်းကြောင့် ၇၁ နှစ်ကြာတဲ့အထိ ပြည်ထောင်စုနေ့ဆိုတာ အမည်ပဲရှိပြီး လက်တွေ့မှာတော့ ပြည်တွင်းစစ်မရပ်နိုင်သေးပါ။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအလွန် ဒီမိုကရေစီအသွင် ကူးပြောင်းမှုကာလမှာတော့ အရင်ကအမှားတွေကို သင်ခန်းစာယူပြီး ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေး၊ တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးတွေ လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သေနတ်သံတွေက ကြားနေရဆဲပါ။ မြောက်ပိုင်းဒေသဘက်မှာဆို သေနတ်သံတွေက အရင် စစ်အစိုးရခေတ်ထက်တောင် ပိုအသံကျယ်သလို ဖြစ်လာနေပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူသုံးများနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားဆိုတာ ဌာနေတိုင်းရင်းသား (Indigenous) ကို ဌာနေမပါဘဲ တိုင်းရင်းသားတစ်ခုတည်းကို ဆွဲယူသုံးစွဲနေတာလို့ ယူဆရပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ရှေးနှစ်ပေါင်း များစွာကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အစဉ်အဆက် နေထိုင်လာခဲ့သူတွေပေါ့။ အရင်ခေတ်ကဆိုရင် ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း ဆိုပြီး လူမျိုးစုကြီး ၈ ခုကို ညွှန်းဆိုလေ့ရှိပါတယ်။ စစ်အစိုးရခေတ်မှာတော့ တိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုးရှိတယ်ဆိုပြီး အာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။
ဒီအပြောကို ပညာရှင်တွေ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေက အစောပိုင်းမှာ ကန့်ကွက်ကြပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ အဲဒီ ၁၃၅ မျိုးကို အတည်ယူပြီး နောက်တိုးလူမျိုးစုတွေဟာ ၁၃၅ မျိုးထဲမှာ စာရင်းမပါတဲ့အတွက် ဌာနေတိုင်းရင်းသား ဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးလို့ ကိုးကားအသုံးပြုလာနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ထားတော့။ အဓိကဆွေးနွေးချင်တာက တိုင်းရင်းသားဆိုတာကို ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကြသလဲ။ တိုင်းရင်းသားဆိုတာ (Indigenous) ဌာနေလူမျိုးကို ဆိုလိုမှန်း လူတိုင်းသိပေမယ့် တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်နဲ့ ရှမ်းလူနည်းစုတွေပဲ တိုင်းရင်းသား စာရင်းပေါက်ပြီး လူများစု ဗမာက တိုင်းရင်းသားထဲ မပါဘူးလို့ အများက နားလည်ထားသလို ဖြစ်လာနေပါတယ်။
ဥပမာ စာရေးသူဆိုရင် ထားဝယ်သံဝဲတဲ့အတွက် “အသံဝဲတယ်နော်။ ဘာတိုင်းရင်းသားလဲမသိဘူး” ဒီလို အမေးခံရပါတယ်။ စာရေးသူရဲ့ မိတ်ဆွေ တောင်ပေါ်သားတွေဆိုရင် “အသံဝဲတယ်နော်။ တိုင်းရင်းသားတွေ ထင်တယ်”ဆိုပြီး မကြာခဏ အပြောခံရတာ သတိထားမိပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင် တိုင်းရင်းသားရဲ့ မူလအဓိပ္ပာယ်နဲ့ မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန် ပုံဖော်ထားတဲ့ နောက်တိုး အဓိပ္ပာယ် မတူဘူးဆိုတာ သိလောက်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်း အသစ်ပေါ်လာတဲ့ တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဆိုတာကို စာဖတ်ပရိသတ်တွေ ဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြ ပါသလဲ။ ဗမာမှအပ ကျန်လူမျိုးစုတွေအတွက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမယ့် ဝန်ကြီးမျိုးလား။ ဒါပေမဲ့ ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့တဲ့ ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ရှမ်းဒေသတွေမှာ ဗမာက လူနည်းစုဖြစ်သွား တဲ့အတွက် ဗမာတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးဆိုတာ ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကတော့ မဆိုးဘူး။ တိုင်းရင်းသားထဲမှာ ဗမာလည်းပါတယ်ဆိုတာကို ပြန်ညွှန်းပြသလို ဖြစ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မရှင်းမလင်းဖြစ်နေတာက အဲဒီ တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးတွေက ဘာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသလဲ။ ဆောင်းပါးအစမှာ နိဒါန်းချီခဲ့သလို ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း ရိုးရာဝတ်စုံတွေ ဝတ်ပြီး ပြည်ထောင်စုနေ့ကပွဲ လုပ်တာတစ်မျိုးပဲ လုပ်ခွင့်ရှိသလား။ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု ထိန်းသိမ်းရေး လောက်ပဲ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသလား။ ဒါမှမဟုတ် တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေနဲ့ ဗမာလူများစုကြားဖြစ်နေတဲ့ အမြင်ကွဲလွဲမှုတွေ၊ တိုင်းရင်းသားတပ်တွေနဲ့ အစိုးရတပ်မတော်အကြားဖြစ်နေတဲ့ လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲ တွေ ရပ်စဲရေး၊ တိုင်းပြည်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအထိ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသလား။ ဒါကို ဒီနေ့လို ပြည်ထောင်စုနေ့မှာ မေးခွန်းထုတ်သင့်တယ် မဟုတ်ပါလား။
လူများစုဆန္ဒကိုလိုက်နာပြီး လူနည်းစုဆန္ဒကို လေးစားပါ
အများစုဆန္ဒကိုလိုက်နာပြီး အနည်းစုဆန္ဒကို လေးစားရေးဆိုတာ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အခြေခံသဘောတရား တစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် ဒီနေ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးမှာတော့ အများစုဆန္ဒကို လိုက်နာရေးပဲ လွှမ်းမိုးနေပြီး အနည်းစုဆန္ဒကို လေးစားဖို့ပြောသူ အတော်နည်းနေတာ သတိထားမိပါတယ်။ လူနည်းစုဆိုတဲ့နေရာမှာ လွှတ်တော်အတွင်း နေရာအနည်းငယ်သာရတဲ့ အတိုက်အခံပါတီငယ်တွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေဆိုပြီး ၂ မျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒီဆောင်းပါးမှာ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုအခွင့်အရေးကိုသာ ဦးစားပေးဆွေးနွေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ အားဖြင့် ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတုန်းက ရခိုင်နဲ့ ရှမ်းပြည်နယ်မှာ ဒေသခံတိုင်းရင်းသားပါတီတွေက အများစု အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ အများစုအနိုင်ရထားတဲ့ NLD ပါတီက အဲဒီတိုင်းရင်း သားပါတီတွေကို ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နေရာ မပေးခဲ့ပါ။ ဘာကြောင့်လဲ။
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ပြည်နယ် - တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တွေကို သမ္မတက တိုက်ရိုက်ခန့်အပ်တာမို့ သူတို့ပါတီက တာဝန်ခံနိုင်တဲ့ ပါတီဝင်တွေကိုသာ NLD ဘက်ကခန့်တာ သဘာဝကျတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ လူများစုအမြင်အရ သဘာဝကျတယ်ဆိုပေမယ့် လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတွေအမြင်အရ ဒါဟာ သဘာဝမကျနိုင်ပါဘူး။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဆီ ချီတက်မယ်ပြောထားသူတွေ၊ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲနောက်ပိုင်းကတည်းက အတူတကွ လက်တွဲဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ မဟာမိတ်ပါတီတွေချင်း ဘာကြောင့် ဒီလောက်လေးတောင် ခွဲတမ်းမပေးနိုင်တာလဲ၊ NLD ပါတီရဲ့ ဖက်ဒရယ်မူ၊ လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ် မူက ဘယ်လိုလဲဆိုပြီး မေးခွန်းထုတ်မှုတွေ ရှိလာနေပါတယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်း ဒုသမ္မတလိုနေရာမျိုး၊ တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးလိုနေရာမျိုးတွေအတွက် ရှမ်းပါတီကို ကမ်းလှမ်းတယ်ဆိုပြီး သတင်းတွေ ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီကမ်းလှမ်းချက်ဟာ ဝန်ကြီးနေရာအတွက် ခွဲတမ်းကမ်းလှမ်းခြင်းသာဖြစ်ပြီး ပါတီအချင်းချင်း ကြိုတင်ဆွေးနွေးမှု ဘာမှ ကြိုမလုပ်ခဲ့ဘူး။ ဒီလိုဆွေးနွေးခွင့်မရတဲ့အတွက် ပါတီအချင်းချင်း ဘယ်လို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မလဲ၊ တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးက ဘာတွေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသလဲဆိုတာ ဘာမှ အတိအကျသိခွင့်မရဘူးလို့ ရှမ်းပါတီဘက်က ပြောတာတွေကို သတင်းတွေထဲ ဖတ်ရပါတယ်။
လတ်တလောဖြစ်နေတဲ့ ရခိုင်ပဋိပက္ခ၊ လူထုတွေကြုံနေရတဲ့ နေ့စဉ်စားဝတ်နေရင်းဒုက္ခနဲ့စာရင် ဒီကိစ္စဟာ အရေးပေါ်ကိစ္စတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ နှစ် ၇၀ နှစ် ကြာဖြစ်နေတဲ့ ပြည်တွင်းစစ်ကို ရပ်စဲမယ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မယ်၊ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆီ ချီတက်မယ်ဆိုရင်တော့ တိုင်းရင်းသား လူနည်းစုတွေရဲ့အသံကို အလေးအနက် နားထောင်ရေး၊ အလုပ်တာဝန်ခွဲဝေပေးရေး (အာဏာခွဲဝေရေး) တွေကိုလည်း အစိုးရဘက်က အလေးထားစဉ်းစားဖို့ လိုပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ ပဋိပက္ခပြေလည်ရေးကို များစွာအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။
ဦးသိန်းစိန် အစိုးရလက်ထက်ကစခဲ့တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ အစီအစဉ်အရဆိုရင် NCA တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးပွဲ (အစိုးရသစ်လက်ထက် ၂၁ ပင်လုံညီလာခံ) ကို တစ်နှစ် ၂ ကြိမ် ကျင်းပရမှာဖြစ်ပေမယ့် မနှစ်က တစ်ကြိမ်ပဲ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နိုဝင်ဘာမှာ ဒုတိယအကြိမ်လုပ်ဖို့ မှန်းထားပေမယ့် အခု ၂၀၁၈ ဖေဖော်ဝါရီလလယ်အထိ ကျင်းပနိုင်မယ့်လက္ခဏာ မတွေ့ရသေးပါ။ NCA မှာ လက်မှတ်ထိုးပြီးသား ရှမ်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့က ဦးစီးကျင်းပတဲ့ လူထုဆွေးနွေးပွဲတွေကို တပ်မတော်က ဝင်ရောက်တားဆီးတဲ့အတွက် ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာ ပြဿနာတွေတက်ပြီး ဆွေးနွေးပွဲတွေ ရပ်ဆိုင်းထားရပါတယ်။
ဒီကြားထဲ ကရင့်အမျိုးသားခေါင်းဆောင် စောဘဦးကြီးရုပ်တုတစ်ခု ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း စိုက်ထူဖို့ပြင် ဆင်နေစဉ် တပ်မတော်ကနေ လာရောက် တားဆီးပိတ်ပင်တာကလည်း အရုပ်ဆိုးလှပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံး အနှံ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်တုတွေ စိုက်ထူနေပြီး ကရင်နယ်မြေမှာ ကရင်ခေါင်းဆောင် ရုပ်တုစိုက်တာကျ ခွင့်မပြုနိုင်တာ ဘာကြောင့်လဲ။ အရင်နှစ်ကလည်း မွန်ပြည်နယ် ဘီလူးချောင်းတံတားကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတံတားဆိုပြီး အတင်းအကျပ်အမည်ပေးလို့ ပြဿနာတွေ တက်ခဲ့ဖူးပြီးပါပြီ။ အမည်တွေ၊ ရုပ်တုတွေကိစ္စမှာတောင် သဘောထားမကြီးနိုင်တဲ့ NLD အစိုးရနဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော်က တိုင်းရင်းသားတွေတောင်းဆိုနေတဲ့ တန်းတူရေးနဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို နားလည် လက်ခံနိုင်ပါ့မလားဆိုတာ မေးခွန်းထုတ်စရာပါ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနေ့ကျင်းပမယ့် ပြည်ထောင်စုနေ့ ညစာစားပွဲမှာ၊ တိုင်းရင်းသားရိုးရာကပွဲတွေမှာ နှစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူတွေ တွေ့ဆုံရင်းနဲ့ ဒီကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးအဖြေရှာနိုင်လေမလား။ ပြည်ထောင်စုနေ့အလွန်မှာ ၂၁ ပင်လုံ ပြန်စနိုင်မလား။ ဒါမှမဟုတ် လူနည်းစု တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ခံစားချက်ကို NLD အစိုးရလူကြီးမင်းတွေနဲ့ တပ်မတော် ဗိုလ်ချုပ်တွေက ဆက်ပြီး လျစ်လျူရှုထားလို့ သေနတ်သံတွေ ပိုကျယ်လာပြီး ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေက အမတ်နေရာ ပိုအနိုင်ရလာလေမလား။
သေချာတာကတော့ လူနည်းစုအရေး၊ တိုင်းရင်းသားအရေးကို ပြေလည်အောင် မကိုင်တွယ်ဘဲနဲ့ တိုင်းပြည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ဖို့ မလွယ်ပါ။ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုအရေး၊ (ဖက်ဒရယ်အရေး) ဟာ ခေါင်းနဲ့ပန်းလို တွဲနေတဲ့အတွက် ၂ ခုစလုံးကို တစ်ပြိုင်တည်း ဖြေရှင်းဖို့လိုပါတယ်။ တစ်ခုကိုချန်ထားပြီး အခြားတစ်ခုကိုပဲ ဦးစားပေးရှင်းနေရင် ချန်ထားခံရတဲ့အပိုင်းက ပြဿနာတွေဟာ ပိုမိုကြီးထွားလာပြီး ဖြေရှင်းဖို့ ပိုခက်ခဲသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ကျရောက်တဲ့ ပြည်ထောင်စုနေ့မှာ ညစာစားပွဲ၊ ကပွဲခုန်ပွဲတွေကိုကျော်ပြီး ဒီမိုကရေစီအရေးနဲ့ ဖက်ဒရယ်အရေးအထိ ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြဖို့ လိုနေပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ ။
Abu Dhabi Tour ပွဲ ပထမနေ့ Kristoff အနုိုင်ရ...။ Ca...